(HUMAN) နာတာရှည်ကိုကင်းအားအပြုအမူနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများသည်နျူကလိယ Accumbens Shell ရှိ osFosB နှင့်ကယ်လ်ဆီယမ် / ကယ်လ်ဒီမင်ဒင်အားမှီခိုသောပရိုတိန်း Kinase II ပါ ၀ င်သောသစ်လွင်မှုကွင်းဆက်လိုအပ်သည်။
နာတာရှည်ကင်းမှ (လူ့) အပြုအမူများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတုံ့ပြန်ချက်တစ်ΔFosBသက်ဆိုင်သော Feedforward Loop နှင့်နျူကလိယ Accumbens ရှဲလ်အတွက်ကယ်လ်ဆီယမ် / Calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း Kinase II ကို (2013) တောင်းဆို
J ကို neuroscience ။ 2013 Mar 6;33(10):4295-4307.
Robison AJ, Vialou V ကို, Mazei-Robison M က, Feng တို့ J ကို, Kourrich S က, Collins က M ကို, Wee S က, Koob, G, Turecki, G, Neve R ကို, သောမတ်စ် M က, Nestler EJ.
အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Fishberg ဦးစီးဌာနနှင့် Friedman ဦးနှောက် Institute မှ, ဆေးပညာ, နယူးယောက်၏သိနာတောင်ပေါ်ကျောင်း, နယူးယောက်, 10029, အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဦးစီးဌာနများနှင့်စိတ်ပညာ, စွဲခြင်းရောဂါ၏ Neurobiology အပေါ်လူ့မျိုးရိုးဗီဇ၏ Institute က, မင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ်, Minneapolis, မင်နီဆိုတာ 55455, ကော်မတီ က The Scripps Research Institute မှ, California, La Jolla 92037 စိတ်ကျရောဂါ Disorders အစီအစဉ်, ဒေါက်ဂလပ်စိတ်ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်အင်စတီကျုနှင့်မြို့ McGill University မှ, Montreal, ကျူးဘက်, ကနေဒါ, H4H 1R3 နှင့်ဦးနှောက်နှင့်သိမှုသိပ္ပံဌာန, နည်းပညာ, ကိန်းဘရစ်မက်ဆာချူးဆက်, မက်ဆာချူးဆက် 02139 ။
အဆိုပါကူးယူအချက်ΔFosBနှင့်ဦးနှောက်-ကြွယ်ဝပြည့်စုံကယ်လစီယမ် / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ကို (CaMKIIα) ကိုကင်းသို့မဟုတ်နှစ်ခုပရိုတိန်းထိခိုက်မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုဖျန်ဖြေသောအလွဲသုံးစားမှု၏အခြား psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါး, မှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်သွေးဆောင်နေကြ ။ ΔFosBနှင့်CaMKIIαနှစ်ဦးစလုံးကိုကင်းဖို့ AMPA အချိုမှု receptor စကားရပ်နှင့် function ကို NAc အတွက် NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း (MSNs), နှင့် locomotor ာင်းထိန်းညှိပေမယ့်အဲဒီမော်လီကျူးအကြားမျှတိုက်ရိုက် link ကိုယနေ့အထိစူးစမ်းခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ΔFosBပရိုတိန်း-တည်ငြိမ် Ser27 မှာCaMKIIαအားဖြင့် phosphorylated ကြောင်းသရုပ်ပြနှင့် CaMKII ဖြစ်ပါသည် ကြွက် NAc အတွက်ΔFosB၏ကင်း-mediated စုဆောင်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သည်။
ပြောင်းပြန်ငါတို့သည်ΔFosB Vivo အတွက်CaMKIIαဗီဇထုတ်ဖော်ကင်းသော induction များအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးကြောင်း: D အဘို့အရွေးချယ်ထားတဲ့ effect ကိုပြသ1အဆိုပါ NAc shell ကိုမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက် MSNs -type.
ထို့အပွငျ NAc MSNs အပေါ် dendritic ကျောရိုး၏ induction နှင့်ΔFosB၏ NAc overexpression ပြီးနောက်ကင်းရန်အမူအကျင့်တုန့်ပြန်တိုးလာမှီခို CaMKII နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။
အရေးကြီးတာကကျနော်တို့၏ NAc အတွက်ΔFosBနှင့် CaMKII ၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သော induction အဘို့ကိုသရုပ်ပြ လူ့ကင်းစွဲအနာဂတ်ကုထုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဘို့ဖြစ်နိုင်သမျှပစ်မှတ်အကြံပြုခြင်း။ ဤရွေ့ကားဒေတာΔFosBနှင့် CaMKII တစ်ဆဲလ်-type- နှင့်နာတာရှည်ကင်းတုံ့ပြန်အတွက်ဦးနှောက်၏အကျိုးကို circuitry ထိန်းညှိဘို့အဓိကယန္တရားအဖြစ်ဦးနှောက်-ဒေသ-တိကျတဲ့အပြုသဘော feedforward ကွင်းဆက်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းကိုမြဲမြံစေ။
တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထား (မျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ယန္တရားများကိုအထောက်အကူပြုသောအမြင်ထောက်ခံပါသည်Robison နှင့် Nestler, 2011) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများတစ်ခုမှာအရေးကြီးသောဖျန်ဖြေΔFosBတစ် Fos မိသားစုကူးယူအချက် (ဖြစ်ပါတယ်Nestler, 2008) ။ အလွဲသုံးစားမှုနီးပါးမည်သည့်မူးယစ်ဆေးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးနျူကလိယ accumbens (NAc), ဆုလာဘ်အပြုအမူတွေများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတစ် limbic ဒေသတွင်း၌ΔFosB၏ကြာရှည်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ S ကuch သော induction D1 dopamine receptors ဖော်ပြကြောင်း NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံဆဲလျ (MSN ကို) ၏အတန်းမှတိကျသောပုံပေါ်ပါတယ်။ ဤအ D1-type အမျိုးအစား NAc MSNs အတွက်ΔFosB၏သွေးဆောင် overexpression ကိုကင်းနှင့်အမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ locomotor နှင့်ကြိုးတုံ့ပြန်မှုတိုးပွါး (Kelz et al ။ , 1999; Zachary et al ။ , 2006), တိုးမြှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင် (Colby et al ။ , 2003). ထို့အပွငျΔFosBမှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုမျိုးဗီဇသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေZachary et al ။ , 2006), ΔFosB၏ဤစဉ်ဆက်မပြတ် induction နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် NAc အတွက်သွေးဆောင်သည့်တည်မြဲပြောင်းလဲမှုများအရေးပါသောအာမခံကြောင်းညွှန်ပြ.
(ရှိသမျှသည်အခြားသော Fos မိသားစုပရိုတိန်းမှဆွေမျိုး) ΔFosB၏ပုံမှန်မဟုတ်သောတည်ငြိမ်မှုအပြည့်အဝအရှည် FosB အတွက်ပစ္စုပ္ပန် degron domains များ (၏ခြင်းကိုကြောင့်မော်လီကျူးတစ်ခုအခ်ါအိမ်ခြံမြေ, နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်Carl et al ။ , 2007), နှင့်ဥပဒေထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်။ ΔFosB phosphorylated ဖြစ်ပါသည် စသည်တို့အတွက် နှင့် Vivo အတွက် Ser27 မှာနောက်ထပ်ဒီတုံ့ပြန်မှုဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် NAc အတွက် ~ 10-ခြံΔFosBတည်ငြိမ် Vivo အတွက် (Ulery-Reynolds က et al ။ , 2009) ။ Ser27-ΔFosB casein kinase-2 တစ်အလွှာဖြစ်ပြထားပြီးဖြစ်သော်လည်း စသည်တို့အတွက် (Ulery et al ။ , 2006), ၎င်း၏ယန္တရား Vivo အတွက် phosphorylation မသိသောနေဆဲဖြစ်သည်။
ကယ်လ်ဆီယမ် / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ကို (CaMKII) အဘယ်သူ၏αနှင့်β isoforms dodecameric homo- နှင့် hetero-holoenzymes ဖွဲ့စည်းရန်အလွန်-ထုတ်ဖော်ပြောဆို serine / threonine kinase ဖြစ်ပါသည် Vivo အတွက်နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် neuroplasticity မျိုးစုံကိုပုံစံအမျိုးမျိုးများအတွက် (Lisman et al ။ , 2002; Colbran နှင့်ဘရောင်း, 2004) ။ CaMKIIα (နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးများက NAc shell ကိုအတွက်ရွေးချယ်သွေးဆောင်နေသည်Loweth et al ။ , 2010), နှင့် NAc shell ကိုအတွက် CaMKII လှုပ်ရှားမှု pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (စိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့်ာင်းလျော့ကျစေပါတယ်Loweth et al ။ , 2008) နှင့်ကိုကင်း (ပီယပ် et al ။ , 1998), ဒီ NAc မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက်CaMKIIα၏ဗိုင်းရပ်စ် overexpression (စိတ်ကြွဆေး၏ရန် locomotor ထိခိုက်စေ Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်နေချိန်တွင်Loweth et al ။ , 2010) ။ CaMKIIα (AMPA အချိုမှု receptor subunits ၏မော်ဂျူမှတဆင့်ဆုလာဘ်အပြုအမူတွေကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါပီယပ် et al ။ , 1998), CaMKIIαလှုပ်ရှားမှုရှည်လျား AMPA အဲဒီ receptor function ကိုနဲ့ဆက်စပ်နှင့် (neuroplasticity အတော်ကြာပုံစံများအတွက် Synaptic-ပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိသည်အဖြစ်Malinow နှင့် Malenka, 2002).
ဒါကစာပေΔFosBနှင့် CaMKII အကြားအတော်ကြာမျဉ်းပြိုင်ပြ: နှစ်ဦးစလုံးအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးမျိုးစုံအမူအကျင့်သက်ရောက်မှုများအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောဖြစ်ကြောင်း, နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးမျိုးသောအာရုံခံဆဲလ်အမျိုးအစားများအတွက် dendritic ကျောရိုး upregulate Vivo အတွက် (Jourdain et al ။ , 2003; ဝင်္ et al ။ , 2010) နှင့်နှစ်ဦးစလုံး AMPA receptors ၏မော်ဂျူမှတဆင့်၎င်းတို့၏အပြုအမူသက်ရောက်မှုအနည်းဆုံးအချို့ကွိုးစားအားထု (Kelz et al ။ , 1999; Malinow နှင့် Malenka, 2002; Vialou et al ။ , 2010) ။ ဤအမျဉ်းပြိုင်နေသော်လည်းΔFosBနှင့် CaMKII အကြားမျှအလုပ်လုပ်တဲ့ link ကိုလူသိများသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ΔFosBနှင့် CaMKII အကြားအပြန်အလှန်စည်းမျဉ်းတည်ထောင်ရန်, ထိုသူနှစ်ယောက်ပရိုတိန်းကိုကင်းများကသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ကင်းတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးကိုထိန်းညှိကြောင်း NAc shell ကိုတစ်ဦး D1-type အမျိုးအစား MSN ကို-သတ်သတ်မှတ်မှတ်အစာကျွေးခြင်း-ရှေ့ဆက်ကွင်းဆက်ဖွဲ့စည်းရန်ကွောငျးတငျပွ Vivo အတွက်.
စမ်းသပ်မှု 1: ကင်းကုသမှုပြီးနောက် NAc Shell နှင့် Core ၏ iTRAQ Proteomic အားသုံးသပ်ခြင်း (သင်္ဘောသဖန်း 1A)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (8 ရက်သတ္တပတ်) အထီးကြွက် 20 ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတကြိမ်တစ်နေ့လျှင် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆားမော်တော်ယာဉ် IP ကို ​​mg အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆေးထိုး, NAc shell ကိုနှင့်အဓိကပြီးနောက် 24 နာရီ (microdissected ခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်း 1A) နှင့် flash ကိုအေးခဲ။ iTRAQ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြရော့စ် et al ။ , 2004; Davalos et al ။ , 2010).
ကိုကင်းများက NAc အတွက် CaMKII ၏ shell-တိကျတဲ့သော induction
စမ်းသပ်မှု 2: ကင်းကုသမှုပြီးနောက် Rat NAc Core နှင့်ရှဲလ်အတွက်ပရိုတိန်းအပြောင်းအလဲများ Quantifying (သင်္ဘောသဖန်း 1B-D ကို)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (8 ရက်သတ္တပတ်) အထီးကြွက် 10 locomotor မှတ်တမ်းတင်အခန်းခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတကြိမ်တစ်နေ့လျှင် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆားမော်တော်ယာဉ် IP ကို ​​mg အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်းများ၏တစ်ခုတည်းသောဆေးထိုးဖို့ Locomotor တုံ့ပြန်မှု (5 / ကီလိုဂရမ် IP ကို ​​mg) ဆားမှ ( "နာတာရှည်" ဟုခေါ်) ကိုကင်းနှင့်ဆား ( "စူးရှသော" ဟုခေါ်) နဲ့ကုသသူတို့၏အမျိုးအဘို့နှင့် locomotor တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူယခင်ကကုသသူတွေကိုတိရိစ္ဆာန်များတှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့သည် တစ်ဦးတည်း ( "ဆား" ဟုခေါ်) ကိုကျန်ရှိနေသေးသောနာတာရှည်ဆား-ကုသတိရိစ္ဆာန်များတှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့သည်။ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ Locomotor လှုပ်ရှားမှု assay (ဖျော်ဖြေခဲ့ကြHiroi et al ။ , 1997) ။ 18 မိ habituate ရန်အဘို့အတိုချုပ်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်မရှိကြောင်းအလေး ထား. Open-လယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်သေတ္တာများ "24 ×" 30 အတွက် (San Diego မှတူရိယာ) ထားရှိခဲ့ကြသည်, ဆား၏တစ်ခုတည်း IP ကိုဆေးထိုးပေးထားကာအပိုဆောင်း 30 မိဘို့စောင့်ကြည့်ခြင်း, ပေးထားသောကြ၏5၏တစ်ခုတည်းသော IP ကိုဆေးထိုး / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း mg နှင့် 30 မိဘို့စောင့်ကြည့်။
ဒီနောက်ဆုံးဆေးထိုးအောက်ပါ 24 နာရီ, ကြွက်အာရုံခံပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်နှင့် phospho-ပြည်နယ်များအပေါ်ထုံဆေး၏ဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားရန်မေ့ဆေးမပါဘဲခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဦးနှောက် Serial တစ် 1.2 မီလီမီတာ matrix ကို (Braintree သိပ္ပံ) တွင်ခွဲနှင့်တစ်သျှူး NAc core နဲ့ကျန်ရှိနေသေးသောတစ် 14 gauge လာကြတယ်များအတွက် 12 gauge လာကြတယ်သုံးပြီး protease (Roche) ပါဝင်သောဖော့စဖိတ် buffered ဆားနှင့် phosphatase (Sigma Aldrich) inhibitors အတွက်ဖယ်ရှားခဲ့သည်ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည် NAc shell ကိုများအတွက်တစ်ရှူး (ကြည့်ရှုပါ သင်္ဘောသဖန်း 1A) နှင့်ချက်ချင်းခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲပေါ်အေးခဲ။ နမူနာအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် RIPA ကြားခံအတွက်အလင်း Sonic အားဖြင့် homogenized ခဲ့ကြသည်: 10 MM Tris အခြေစိုက်စခန်း, 150 MM ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်, 1 MM EDTA, 0.1% ဆိုဒီယမ် dodecyl sulfate, 1% ထရီ X-100, 1% ဆိုဒီယမ် deoxycholate, သော pH 7.4, protease နှင့် phosphatase inhibitors အထက်အဖြစ်။ Laemmli ကြားခံ၏ထို့အပြင်ပြီးနောက်ပရိုတိန်း 4-15% polyacrylamaide gradient ကို gels (စံစနစ်, BioRad) ရက်နေ့တွင်ကွဲကွာခဲ့ကြနှင့်အနောက်တိုင်းချေထုတ်လုပ်သူ protocols များနှင့်အညီ Odyssey စနစ် (Li-ကော) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 3: ကင်း Withdrawal ပြီးနောက် Rat NAc Core နှင့်ရှဲလ်အတွက်ပရိုတိန်းအပြောင်းအလဲများ Quantifying (သင်္ဘောသဖန်း 1E)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (8 ရက်သတ္တပတ်) အထီးကြွက် 10 ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတကြိမ်တစ်နေ့လျှင် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆားမော်တော်ယာဉ် IP ကို ​​mg အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ 14 ရက်နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်, ဆားနဲ့ကုသတိရစ္ဆာန်များ (ခေါ်တော်မူသည်အခြားဆားဆေးထိုးပေးခဲ့ "ဆား), နှင့်ကိုကင်းနဲ့ကုသတိရစ္ဆာန်များ (14 နေ့ကဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်ခေါ်တော်မူသည်အခြားဆားဆေးထိုးပေးခဲ့" (14d WD ") သို့မဟုတ်ကင်း၏တစ်ခုတည်းသောဆေးထိုး စိန်ခေါ်မှုအတွက် "14d WD Chal") ဟုခေါ်တွင်။ နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်တစ်ခုမှာနာရီ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံနှင့်အနောက်တိုင်းချေကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ စမ်းသပ်မှု 2.
စမ်းသပ်မှု 4: ကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် Rat NAc Core နှင့်ရှဲလ်အတွက်ပရိုတိန်းအပြောင်းအလဲများ Quantifying (သင်္ဘောသဖန်း 2A-C မှာ)
ကြွက်ကိုးနေ့ရက်ကာလအဘို့တစ် fixed-အချိုး 0.5 အချိန်ဇယားအောက်တွင်တဦးတည်း-နာရီအစည်းအဝေးများအတွက်ကင်း၏ Self-စီမံခန့်ခွဲ 1 mg / kg / ပြုတ်ရည်မှလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကိုးအခြေခံအစည်းအဝေးများပြီးနောက်ကြွက်ကနောက်ဆုံးနှစ်ခုအစည်းအဝေးများအပေါ်ကိုကင်းစားသုံးမှုအားဖြင့်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းအုပ်စုနှစ်စုခွဲခဲ့ကြသည်။ ကြွက်တစ်ခုမှာအုပ်စုကိုခြောက်နာရီအစည်းအဝေးများအတွက်ကြွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်း၏အခြားအုပ်စုတစ်စု (ရှည်လျားသော access ကို, LgA စဉ် (တိုတောင်း access ကို, SHA) One-နာရီအစည်းအဝေးများအတွက် Self-စီမံခန့်ခွဲကိုကင်း (0.5 mg / kg / ပြုတ်ရည်) မှခွင့်ပြုခဲ့သည် ) တစ်ဆယ်နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း (တင်းမာမှုအစည်းအဝေးများ) သည်။
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဦးနှောက်အပိုင်း immunohistochemistry များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည် (Perrotti et al ။ , 2004) ။ ဦးနှောက်အားလုံးကျန်ရှိသော immunoreactivity ΔFosBထင်ဟပ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့မဆိုကျန်နေတဲ့ Full-အရှည် FosB ပရိုတိန်း၏ပျက်စီးခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, မူးယစ်ဆေးဝါးမှနောက်ဆုံးအထိတွေ့ပြီးနောက် 18-24 နာရီ perfused ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ပျက်စီးခြင်းΔFosB (Data ပြမပါ) ကိုအသိအမှတ်မပြုပါဘူးကြောင့် Full-အရှည် FosB ၏ကို C terminus ဆန့်ကျင်ညွှန်ကြားထားတဲ့ antibody ကိုမသိသိသာသာအစွန်းအထင်းပြသပေးသောအနောက်တိုင်းချေ, ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ 35 μmကဏ္ဍများသို့သွေးတွေစီးထွက်လာပြီးနောက်ΔFosB immunopositive ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကြွက်များ၏ NAc မှတဆင့်နှစ်ခုကဏ္ဍများအတွက်မကျြစိကှလေ့လာသူများက quantified ခဲ့ပါတယ်နှင့်လယ်ပြင်× 40 နှုန်းယုတ်တန်ဖိုးများပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်ဒေသအားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်တစ်ဦးချင်းလေ့လာရေးစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးစီးပွားနေရာများ Paxinos နှင့် Watson (သုံးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြPaxinos နှင့် Watson, 2007).
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့CaMKIIα immunoreactivity ၏အရေအတွက် (က Licor စနစ်အား အသုံးပြု. လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်Covington et al ။ , 2009) ။ CaMKII နှင့် GAPDH ၏ဘက်ပေါင်းစုံပြင်းထန် Odyssey ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ ရလဒ်များမီလီမီတာနှုန်းဘက်ပေါင်းစုံပြင်းထန်မှုတန်ဖိုးများအဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်2 ± sem (ဆိုလိုတယ်အဖြစ်နှင့်တင်ပြကြသည်n အုပ်စုတစ်စုနှုန်း = 4-10) ။ GAPDH များအတွက်တန်ဖိုးများကိုအချပ်ထူများနှင့်အခြေအနေများအဘို့အ CaMKII ပြင်းထန်မှုပုံမှန်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်၏ NAc shell ကိုနှင့်လူ့ကိုကင်းစွဲအတွက် CaMKII ၏ induction
စမ်းသပ်မှု 5: ကင်း-မှီခိုလူသားတွေဟာအတွက်ပရိုတိန်း Levels Quantifying (သင်္ဘောသဖန်း 2D)
Postmortem လူ့ဦးနှောက်တစ်ရှူးအဆိုပါကွိဘက်သေကြောင်းကြံစည်မှုဦးနှောက်ဘဏ်ထံမှရရှိသောခဲ့ကြသည် (ဒေါက်ဂလပ်စိတ်ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်အင်စတီကျု, Montreal မှာ Quebec, ကနေဒါ) ။ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ရှူးများ၏ထိန်းသိမ်းခြင်း (မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဆက်လက်Quirion et al ။ , 1987) ။ အတိုချုပ်တစ်ကြိမ်ထုတ်ယူ, ဦးနှောက်တစ်ဦးစတိုင်ရိုဖောင်း box ထဲမှာစိုစွတ်သောရေခဲပေါ်မှာနေရာချစကာနှင့်ကွိဘက်သေကြောင်းကြံစည်မှုဦးနှောက်ဘဏ်အဆောက်အဦမှတဟုန်တည်းပြေးနေပါတယ်။ hemisphere တစ်ဦးကိုချက်ချင်း sagittal ဦးနှောက်ရဲ့အလယ်မှာဖြတ်, ဦးနှောက်ကို stem နှင့် cerebellum အားဖြင့်ကွဲကွာနေကြသည်။ သွေးကြော, pineal ဂလင်း, choroid plexus တဝက် cerebellum နှင့်တစ်ဝက်ဦးနှောက်ကို stem ပုံမှန်အားထို့နောက်အေးခဲနေသောမတိုင်မီ 1 စင်တီမီတာအထူချပ်သို့ coroner ဖြတ်သောလက်ဝဲ hemisphere ကနေခွဲဖြာနေကြပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောဝက် cerebellum အေးခဲနေသောမတိုင်မီ 1cm-ထူချပ်သို့ sagittally ဖြတ်သည်။ တစ်ရှူး ~2စက္ကများအတွက် -40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 60-methylbutane အတွက်အေးခဲ flash ကိုဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးအေးစက်နေတဲ့တစ်ရှူးရေရှည်သိုလှောင် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာပလပ်စတစ်အိတ်အတွင်းသီးခြားစီပြသလျက်ရှိသည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ပတ်ဝန်းကျင်၏အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ပတ်လည်ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲနဲ့သံမဏိပန်းကန်ပေါ်အေးစက်နေတဲ့ Coronal ချပ်ကနေခွဲဖြာနေကြပါတယ်။ ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအနောက်တိုင်းချေဖျော်ဖြေခဲ့သည် စမ်းသပ်မှု 2.
အဆိုပါဆောင်များတွင် 37-3 နှစ်အကြားအသက်အရွယ်အတွင်းရှိအထိ 15 ယောက်ျားနှင့် 66 အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များ၏ရေးစပ်ခဲ့သည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များတစ်ကြာရှည်ရောကျသောပြည်နယ်သို့မဟုတ်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆေးဝါးကုသမှုနာမကျန်းခြင်းမရှိဘဲရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွား. တစ်ခုချင်းစီကိုအမှု၌, သေမင်း၏အကြောင်းရင်းမှာကွိဘက်ရဲ့ Coroner ရုံးကစေ့စေ့မေးမြန်းပြီးခဲ့ပါတယ်နှင့် toxicological မျက်နှာပြင်၏သေခြင်းအချိန်ကဆေးဝါးနှင့်တရားမဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်တစ်ရှူးနမူနာအတူကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်အုပ်စုတစ်စုကိုကင်းမှီခိုများအတွက် SCID-ငါစံတွေ့ဆုံခဲ့သူကို 20 တစ်ဦးချင်းစီ၏ပါဝင်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုကိုကင်းမှီခိုမရှိသမိုင်းနှင့်မျှမတို့အဓိကစိတ်ရောဂါ diagnoses နှင့်အတူ 20 ဘာသာရပ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များဦးနှောက်တစ်သျှူးမတိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်းအကြောင်းတရားများထဲကနေရုတ်တရက်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုများယုတ်ဘာသာရပ်အသက်, အအေးနှောင့်နှေးခြင်း, pH ကိုအဘို့အလိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အားလုံးဘာသာရပ်များအဘို့, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူသခှေဲစိတျခွငျး (ဖျော်ဖြေခဲ့ကြDumais et al ။ , 2005), ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ရောဂါနှင့်ဆေးဝါးသမိုင်းအပေါ်အသေးစိတ်ကိစ္စတွင်သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ကတခြားသက်ဆိုင်ရာလက်တွေ့နှင့် sociodemographic ဒေတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြု။ အကျဉ်းခုနှစ်တွင်တစ်ဦးလေ့ကျင့်သင်ကြားအင်တာဗျူးအတွက်ကောက်ယူ DSM-IV များအတွက်စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူး ကွယ်လွန်သူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသတင်းပေးနှင့်အတူစိတ်ရောဂါ Disorders (SCID-ငါ) ။ Clinician တစ် panel ကသဘောတူစိတ်ရောဂါ diagnoses ရရှိရန် SCID-ငါအကဲဖြတ်, အမှုအစီရင်ခံစာများ, coroner ရဲ့မှတ်စုများ, နှင့်ဆေးဝါးမှတ်တမ်းများပြန်လည်သုံးသပ်။
စမ်းသပ်မှု 6: Rat NAc များအတွက် Chromatin immunoprecipitative (သင်္ဘောသဖန်း 3A-C မှာ)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (8 ရက်သတ္တပတ်) အထီးကြွက် 10 ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတကြိမ်တစ်နေ့လျှင် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆားမော်တော်ယာဉ် IP ကို ​​mg အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆေးထိုး, NAc shell ကိုနှင့်အဓိကပြီးနောက် 24 နာရီ microdissected ခဲ့ကြသည်။ Chromatin immunoprecipitative (chip) (14 တိရိစ္ဆာန်များ, 98 ဆားရေကန်7ကင်းရေကန်စုစုပေါင်း)7စုစုပေါင်းအုပ်စုများအတွက်အုပ်စုတစ်စုနှုန်းနဲ့ခုနစ်ခုကြွက်ကနေ shell ကိုသို့မဟုတ် core ကိုနှစ်နိုင်ငံ NAc လာကြတယ် pooling ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ တစ်ရှူး Cross-နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်ကိုဆေးကြောခြင်း, Sonic အားဖြင့် chromatin မှေးကိုသည်အထိ -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား။ Sheared chromatin ယခင်ကသံလိုက်ပုတီး (Dynabeads က M-280, Invitrogen) ကိုခညျြနှောငျပဋိနှင့်အတူနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည်။ non-ကိုယ်ခံစွမ်းအား IgG တစ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပြောင်းပြန်လက်ဝါးကပ်တိုင်-Link နှင့် DNA ကိုသန့်စင်ပြီးနောက် qPCR CaMKIIαကမကထ DNA ကိုအဆင့်တိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ primer မတိုင်မီကူးယူစတင် site ကိုမှ ~ 1 BP တည်ရှိပြီးတစ်ခုက AP-450 သဘောတူညီမှု sequence ကိုင်တစ်ဦးဒေသများကိုချဲ့ထွင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ (Forward: ACTGACTCAGGAAGAGGGATA; နောက်ပြန်: TGTGCTCCTCAGAATCCACAA) ။
cell type- နှင့်CaMKIIα၏ဒေသ-တိကျတဲ့ΔFosBသော induction Vivo အတွက်
စမ်းသပ်မှု 7: ဆဲလ်-Type-Specific ΔFosB Overexpression (နဲ့အတူ CaMKII စကားစာသားနှင့်ပရိုတိန်းဖော်ပြမှုတိုင်းတာခြင်းသင်္ဘောသဖန်း 3D)
ကနေဆင်းသက်လာအထီး bitransgenic ကြွက် NSE-tTA (လိုင်းတစ်) × TetOp-ΔfosB (လိုင်း 11) နှင့် NSE-tTA (လိုင်းခ) × TetOp-အလံ-ΔfosB (လိုင်း 11) ကြွက် (ချန် et al ။ , 1998; Kelz et al ။ , 1999; Werme et al ။ , 2002; Zachary et al ။ , 2006) ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းΔFosBစကားရပ်နှိမ်နင်းရန် 100 μg / ml doxycycline အပေါ်ပဋိသန္ဓေနှင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသည်။ Littermates နို့မှာကွဲပြတ်လျက်ရှိ၏: တစ်ဝက်ရေမှ switched ခဲ့ကြသည် doxycycline တဝက်ပေါ်ကျန်ရစ်နှင့်တိရစ္ဆာန်ΔFosB၏မှတ်တမ်းသက်ရောက်မှု (အကျယ်ချဲ့အခါနောက်ပိုင်းတွင်ရက်သတ္တပတ် 8 မှ 11 အသုံးပြုခဲ့ကြသည်Kelz et al ။ , 1999; McClung နှင့် Nestler, 2003) ။ မှတ်တမ်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်, ကြွက်လျှင်မြန်စွာခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ကြနှင့်ဦးနှောက်ကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်များနှင့်ရေခဲပေါ်တင်လိုက်တယ်။ NAc ၏ခှဲစိတျတစ် 14-gauge အပ်လာကြတယ်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာ RNA ဖြည်ချသည်အထိခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲပေါ်အေးခဲခဲ့ကြသည်။ RNA အထီးကျန်မှုတွေ, qPCR နှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြLaPlant et al ။ , 2009) ။ အတိုချုပ်, RNA Qiagen ထံမှ RNAeasy အသေးစားကိရိယာအစုံနှင့်အတူနောက်ထပ်သန့်, TriZol ဓါတ်ကူပစ္စည်း (Invitrogen) နဲ့အထီးကျန်နှင့်သွက်လက်ရဲ့ Bioanalyzer နှင့်အတူအရည်အသွေး check လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းပြန်ကူးယူ iScript (BioRad) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ qPCR အောက်ပါသံသရာ parameters များကိုအတူတစ်အသုံးချ Biosystems 7900HT RT ကို PCR စနစ်ဖြင့်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်: 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 95 မိ; 40 စက္က, 95 စက္ကများအတွက် 1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်များအတွက် 60 မိ, 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်များအတွက် 72 ° C ၏ 30 သံသရာ; တစ်ခုတည်း PCR ထုတ်ကုန်များ၏အတည်ပြုချက်ကိုများအတွက် dissociation ခါးဆစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 95 မှအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောအပူ။ ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းΔFosBနှင့်CaMKIIαပရိုတိန်းထုတ်ဖော် Immunohistochemical ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြ စမ်းသပ်မှု 4.
စမ်းသပ်မှု 8: ကင်း-mediated ပရိုတိန်းအပြောင်းအလဲများအပေါ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc D1 နှင့် D2 Dopamine receptor ရန်သက်ရောက်မှု (သင်္ဘောသဖန်း 3H)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (8 ရက်သတ္တပတ်) အထီးကြွက် 10 ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတကြိမ်တစ်နေ့လျှင် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆားမော်တော်ယာဉ် ( "မော်တော်ယာဉ်" အုပ်စုတစ်စု) IP ကို ​​mg အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကြိုတင်အသီးအသီးကိုကင်းဆေးထိုးဖို့ 30 မိ, ကြွက်တို့သည် D1 အဲဒီ receptor ရန် SCH 23390 (0.5 mg / kg, "D1 ပုရွက်ဆိတ်" အုပ်စုတစ်စု), ဒါမှမဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ရန် eticlopride (0.5 / ကီလိုဂရမ် mg, "D2 ပုရွက်ဆိတ်" အုပ်စုတစ်စု) ဖြစ်စေအုပ်ချုပ်အိုင်ပီခဲ့ကြသည် သို့မဟုတ်ဆားထိန်းချုပ်မှုဆေးထိုး ( "ကင်း" အုပ်စုတစ်စု) ။ နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 24 နာရီ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှုန်းအဖြစ်အနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခြင်းနှင့်ပရိုတိန်း quantified ခဲ့ကြသည် စမ်းသပ်မှု 2.
စမ်းသပ်မှု 9: ပရိုတိန်းဖော်ပြမှုအပေါ် AAV-ဖျန်ဖြေΔFosB Overexpression သက်ရောက်မှု (သင်္ဘောသဖန်း4A-C ကို)
Stereotaxic ခွဲစိတ် AAV-GFP (အစိမ်းရောင်ချောင်းပရိုတိန်း) သို့မဟုတ် AAV-GFP-ΔFosB (ထိုးသွင်းဖို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက် (8 ရက်သတ္တပတ်) မှာဖျော်ဖြေခဲ့သည်ဝင်္ et al ။ , 2010) ။ 33 gauge တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် (Hamilton က) မြန်မာနိုင်ငံသ Post-ပြုတ်ရည်ကြွင်းသောအရာကာလမိကာနောက်ထပ် 0.5 အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အချိန်တစ်5မိကာလ, ကျော်ထုံမွှန်းခံခဲ့ရသန့်က high-titer ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏μlရာ5စဉ်အတွင်းအားလုံးခွဲစိတ်များအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအကွာအဝေး Bregma မှဆွေမျိုးတိုင်းတာနေကြပါတယ်: ထောင့်, အေပီ = + 10 မီလီမီတာ, လတ် = 1.7 မီလီမီတာ, DV = -2.5 မီလီမီတာ° 6.7 ။ 14 ရက်ပေါင်းခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်, တိရိစ္ဆာန်များ 10 မီလီဂရမ် / ΔFosB overexpression များ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန် locomotor စောင့်ကြည့်ရေးအခန်းကီလိုဂရမ်ကိုကင်းများ၏တစ်ခုတည်း IP ကိုဆေးထိုးပေးထားခဲ့ကြသည်။ ဒီနောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 24 နာရီ, ကြွက်နှုန်းအဖြစ်ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ကြ စမ်းသပ်မှု 2နှင့်တစ်ရှူး microdissection GFP-အပြုသဘော NAc တစ်ရှူးရရှိရန်ချောင်းဏုလမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အနောက်တိုင်းချေထို့နောက်နှုန်းအဖြစ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် စမ်းသပ်မှု2။
ΔFosB NAc shell ကိုအတွက်ကိုကင်း-mediated D1 အဲဒီ receptor-မှီခိုCaMKIIαသော induction များအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်
စမ်းသပ်မှု 10: ကင်း-မှီခိုပရိုတိန်းဖော်ပြမှုအပေါ် AAV-ဖျန်ဖြေΔJunD Overexpression သက်ရောက်မှု (သင်္ဘောသဖန်း4D-F ကို)
AAV-GFP သို့မဟုတ် AAV-GFP-ΔJunD၏ Stereotaxic ဆေးထိုးနှုန်းအဖြစ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် စမ်းသပ်မှု 8 ။ 14 ရက်ပေါင်းခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်, တိရိစ္ဆာန်များ 10 locomotor မှတ်တမ်းတင်အခန်းခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတကြိမ်တစ်နေ့လျှင် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆားမော်တော်ယာဉ် IP ကို ​​mg အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်းများ၏တစ်ခုတည်းသောဆေးထိုးဖို့ Locomotor တုံ့ပြန်မှု (5 / ကီလိုဂရမ် IP ကို ​​mg) သို့မဟုတ်ဆားမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 24 နာရီ, ကြွက်တစ်သျှူးရိတ်သိမ်း, ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံနှင့်အနောက်တိုင်းချေကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ စမ်းသပ်မှု9။
စမ်းသပ်မှု 11: စသည်တို့အတွက် ပရိုတိန်း Kinase assay (သင်္ဘောသဖန်း 5A-D ကို)
Recombinant CaMKIIαနှင့်ΔFosB (အင်းဆက်ပိုးမွှားဆဲလ်ထဲကနေကိုစင်ကြယ်စေခဲ့သည်Brickey et al ။ , 1990; Jorissen et al ။ , 2007) နှင့်ပရိုတိန်း kinase assay ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ (Colbran, 1993), ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့။ အတိုချုပ်, CaMKII ΔFosB၏ 2.5 μM (သို့မဟုတ်ညွှန်ပြအာရုံစူးစိုက်မှု), 1 MM Ca နှင့်အတူရေခဲပေါ် preincubated ခဲ့သည်2+, 40 MM Mg2+, 15 μM calmodulin နှင့် 200 MM HEPES သော pH 7.5 ။ Phosphorylation [γ-နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ 200 μM ATP ကဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးခဲ့သည်32: P] ATP နှင့်အခန်းအပူချိန်မှာ 10 မိဘို့အဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု (သင်္ဘောသဖန်း 5A & B) သို့မဟုတ်2မိရေခဲပေါ် (ပုံ 5C & D) ။ ကုန်ပစ္စည်းများ (အနောက်တိုင်းချေခြင်းဖြင့်ပြေလည်ခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်း 5A & B) သို့မဟုတ် autoradiogram နှင့် scintillation ရေတွက် (ပုံ B-D) သည်။
စမ်းသပ်မှု 12: Ser27 ΔFosB Phosphorylation ၏သတ်မှတ်ခြင်း (သင်္ဘောသဖန်း 5E)
စသည်တို့အတွက် kinase assay နှုန်းအဖြစ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ စမ်းသပ်မှု 11, ပရိုတိန်း SDS-စာမကျြနှာဖွငျ့ကွဲကွာခဲ့ကြနှင့်ΔFosBမှသက်ဆိုင်ရာခညျြအနှောထွက်ခုတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်တွဲဖက်အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometry အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမီတာ / အဆိုပါပြားရှိသမျှတို့ကိုအတွက်သက်ဆိုင်ရာအိုင်းအပိုင်းအစများ၏ z တာဝန်ကျသည့် ion ထိပ်ထိပ်ပေါ်မှာတံဆိပ်တပ်ထားပါသည်။ အားလုံးကတော့အပိုင်းအစအိုင်းယွန်းကြောင့်အာကာသန့်အသတ်မှတံဆိပ်တပ်ထားပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုအပိုင်းအစအိုင်းတံဆိပ်များများအတွက်စာသားကိုသူတို့တိုက်ရိုက်အတည်ပြုဒါမှမဟုတ်သူတို့အနီရောင်မှတ်သားထားတဲ့အရာအမှု၌အကျိုးစီးပွား၏ phosphorylation က်ဘ်ဆိုက်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်မှသက်သေအထောက်အထားများကိုထည့်သွင်းသည့်အခါ မှလွဲ. အနက်ရောင်ထဲမှာရောင်စုံနေကြသည်။ ကျောရိုးအကွဲကွဲအပြားပြားထုတ်ကုန်များအတွက်အထောက်အထားတစျခုတညျးအမိုင်နိုအက်ဆစ်စာတစ်စောင်သတ်မှတ်ရေးနှင့်အတူအနီရောင်ညွှန်ပြ phosphorylation ကျန်ကြွင်းများ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိ site ကိုအတူ phosphopeptide ၏ sequence ကို readout အတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာအပိုင်းအစအိုင်းယွန်းများ၏ဂဏန်းဖော်ပြချက်ကိုလည်းခနှင့်က y အိုင်းယွန်းအဖြစ် peptide sequence ကိုအပေါ်မှတ်သားနေကြသည်။ အဆိုပါမီတာ / z ဝင်ရိုး၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက် zoom ကိုအချက်များအောက်ပိုင်းပြင်းထန်မှုအပိုင်းအစအိုင်းယွန်းအသီးအသီးအပိုင်းအစအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများရဲ့ထိပ်မှာမှတ်သားထားတဲ့ပြသနိုင်ဖို့။ panel က H ကိုမှာပြထားတဲ့အပိုင်းအစအိုင်းယွန်းက်ဘ်ဆိုက်များ Ser27, Ser28, Ser31 နှင့် Thr34 မှာအခြားအ phosphorylated isoforms အရောအနှောအတွင်းသို့သော် Ser37 phosphorylated isoform ၏ရှေ့မှောက်တွင်အတည်ပြု။ pa5, pa5-P ကို, pb5 နှင့် pb5-P ကိုအိုင်းယွန်းများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ထူးခြားသည့် Ser27 ကျန်ကြွင်းများ၏ phosphorylation အတည်ပြုပါ။
စမ်းသပ်မှု 13: Ser27 phosphorylation ၏အရေအတွက် (သင်္ဘောသဖန်း 5F)
စံ peptides Ser27 ΔFosB၏ phospho နှင့် Non-phospho ပုံစံများန်းမှာဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်သန့်စင်ပြီးနောက်အသီးအသီး "လေးလံသော" idiotypic peptide တစ် 50 / 50 acetonitrile / ရေကြားခံနှင့်ဒြပ် peptide စတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းချက်အပေါ်အကြွင်းမဲ့အာဏာအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်လူကိုစေလွှတ်အတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို "လေးလံ" peptide ပြီးတော့တိုက်ရိုက်က MS / MS အကွဲကွဲအပြားပြားနှစ်ခုမှလေး MRM အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတိုက်မှုစွမ်းအင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ 4000 QTRAP အစုလိုက်အပြုံလိုက် Spectrometer (က MS) သို့ထုံမွှန်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်သပ်သပ်ရပ်ရပ် "လေးလံသော" peptides peptide ခွဲခြာသေချာဖို့ 4000 QTRAP အပေါ် LCMS အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ Q1 (Q1 scan ဖတ်မပါ) ကိုတိကျတဲ့ရှေ့ပြေးမီတာ / z တန်ဖိုးကိုအပေါ်တည် ထား. , Q3 ကြောင်း peptide တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အပိုင်းအစနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သီးခြားမီတာ / z တန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားအတူတူရိယာ, ထိုသုံးဆ quadrupole mode မှာ run ခဲ့သည်။ အဆိုပါ MRM mode မှာ, ကြင်ဖော်တုံ့ပြန်မှုကို (တိုက်မှုစွမ်းအင်အကျိုးစီးပွား၏အပိုင်းအစအိုင်းယွန်းများ၏ပြင်းထန်မှုပိုကောင်းအောင်ညှိသည်အဘယ်မှာရှိရှေ့ပြေး / အပိုင်းအစအိုင်းအသွင်ကူးပြောင်းမှု) ၏စီးရီးစီစဉ်တတိုင်းတာခဲ့ကြသည်, ထိုသံသရာ (ပုံမှန်အား 1-2 စက္ကန့်) တစ်လျှောက်လုံး looped ခဲ့သည် အဆိုပါ HPLC ခြားနားတစ်ခုလုံးကိုအချိန်။ MRM အသွင်ကူးပြောင်းမှုတည်ဆဲ peptides ၏က MS / MS ဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများကနေဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုအပိုင်းအစအိုင်းယွန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ peptide နှုန်းနှစျခုအကူးအပြောင်း, ထို့နောက်အလိုအလျောက် software ကိုသုံးပြီး MRM အသွင်ကူးပြောင်းမှု၏အချက်ပြအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရှေးခယျြထားနှင့်တိုက်မှုစွမ်းအင် optimized ခဲ့ကြသည်။ စံ peptides နှင့် CaMKII သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုထိတွေ့ΔFosBနမူနာကနေရရှိလာတဲ့ Peak တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ peptide ပုံစံ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာများစွာသောဆုံးဖြတ်ရန်နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ခဲ့ကြသည်။ LC-MRM ဒေတာအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ AB Multiquant 1.1 software ကိုသုံးပြီးဖျော်ဖြေနေသည်။
စမ်းသပ်မှု 14: CaMKII အတွက်ΔFosB၏ induction ကြွက်တွေ Overexpressing (သင်္ဘောသဖန်း 5G & H ကို)
T286D CaMKII overexpressing Transgene ကြွက် (Mayford et al ။ , 1996; Kourrich et al ။ , 2012) နှင့်သားရိုင်းအမျိုးအစား littermates Transgene စကားရပ်ခွင့်ပြု doxycycline ၏မရှိခြင်းမှာကြီးပြင်းခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက် 20 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်ချိန်ကနေ့စဉ် 14 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆား IP ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 24 နာရီ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ကြခြင်းနှင့်ΔFosBထုတ်ဖော် immunohistochemistry နှင့်အရေအတွက်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့သည် စမ်းသပ်မှု 4.
စမ်းသပ်မှု 15: NAc Dendritic ကျောရိုးအပေါ် HSV-ဖျန်ဖြေΔFosB Overexpression နှင့် CaMKII တားစီးသက်ရောက်မှု (သင်္ဘောသဖန်း 6A-E)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက် (8 ရက်သတ္တပတ်) stereotaxically HSV-GFP, HSV-GFP-ΔFosB (နဲ့အတူ NAc အတွက်ထိုးသွင်းခဲ့ကြOlausson et al ။ , 2006), HSV-GFPAC3I, ဒါမှမဟုတ် HSV-GFPAC3I-ΔFosB။ ဤအဆောက်လုပ်ရေးအတွက်, AC3I, CaMKII လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦး peptide-based inhibitor, GFP ၏ C-terminus မှ fused ဖြစ်ပါတယ်။ GFPAC3I-F: GFPAC400I အောက်ပါ primer နှင့်အတူတစ်ဦး template ကိုအဖြစ် GFPAC3I များ pMM3-အားနည်းချက်ကိုသုံးပြီး PCR နေဖြင့်ပုံတူမျိုးပွားခဲ့သည်5'' CC ကို GCTAGC GCCGCCACC ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGT3'(clampNheIKozakmet); GFP-AC3I-R:5'' CC ကို TCCGGA TTACAGGCAGTCCACGGCCT3'(clampBspEIstop) ။ ရရှိလာတဲ့ PCR ထုတ်ကုန် p1005 + နှင့် NheI နှင့် BspEI က်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. p1005 + -Δ FosB virus သယ်ဆောင်သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်အားဖြင့်အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ Stereotaxic သြဒီနိတ်ခဲ့ကြသည်: ထောင့်, အေပီ = + 10 မီလီမီတာ, လတ် = + 1.6 မီလီမီတာ, DV = -1.5 မီလီမီတာ (။ Barrot et al, 4.4) ° 2002 ။ Perfusion နှင့်ဦးနှောက်အပိုင်းနှုန်းအဖြစ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် စမ်းသပ်မှု 4.
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျောရိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ဖျော်ဖြေခဲ့သည်Christoffel et al ။ , 2011) ။ အတိုချုပ်, ကွာ Soma ထံမှ dendritic အစိတ်အပိုင်းများ 50-150 μmကျပန်း GFP ဖော်ပြကြောင်း HSV-ကူးစက်ဆဲလ်ကနေရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ပုံတွေကို rayburst algorithm နှင့်အတူ NeuronStudio သုံးပြီး morphological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် confocal LSM 710 (Carl Zeiss) ရက်နေ့တွင်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ (1) အချိုး, (2) လည်ပင်းအချိုးမှဦးခေါင်း, နှင့် (3) ဦးခေါင်းကိုအချင်း: NeuronStudio အောက်ပါတန်ဖိုးများပေါ်တွင်အခြေခံကျောရိုးအဖြစ်ပါးလွှာ, မှို, ဒါမှမဟုတ်ပေးသော Stubby classifies ။ တစ်ဦးလည်ပင်းနှင့်အတူကျောရိုးပါးလွှာသို့မဟုတ်မှိုဖြစ်စေအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပြီး, သိသိသာသာလည်ပင်းမရှိဘဲသူတို့အားပေးသော Stubby အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ တစ်ဦးလည်ပင်းနှင့်အတူကျောရိုးခေါင်းကိုအချင်းအပေါ်အခြေခံပါးလွှာသို့မဟုတ်မှိုအဖြစ်တံဆိပ်တပ်ထားပါသည်။
CaMKII လှုပ်ရှားမှုပိတ်ဆို့ NAc အတွက်ΔFosB၏ morphological နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုကိုတားဆီး
စမ်းသပ်မှု 16: ကင်းတုံ့ပြန်ချက်အပေါ် HSV-ဖျန်ဖြေΔFosB Overexpression နှင့် CaMKII တားစီးသက်ရောက်မှု (သင်္ဘောသဖန်း 6F)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်နှုန်းအဖြစ်ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ထိုးသွင်းခဲ့ကြ စမ်းသပ်မှု 15ကိုကင်းများ၏တစ်ခုတည်း5mg / kg ဆေးထိုးနှုန်းအဖြစ်တိုင်းတာခဲ့သည်ငှါ၎င်း, locomotor တုံ့ပြန်မှု စမ်းသပ်မှု9။ Locomotor ဒေတာကိုကင်းဆေးထိုးပြီးနောက် 30 မိကျော်စုစုပေါင်းရောင်ခြည်လပ်ချိန်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
အထီး Sprague Dawley ကြွက် (250-275 ပါ g; ချားလ်စ်မြစ် Laboratories) pair တစုံ-သျောခဲ့ကြသည်။ ရှစ်ပတ်ကြာအရွယ် C57BL / 6J အထီးကြွက် (အဆိုပါ Jackson ကဓါတ်ခွဲခန်း) လှောင်အိမ်နှုန်းငါးတိရစ္ဆာန်များ၏အမြင့်ဆုံးနှင့်အတူသျောအုပ်စုတစ်စုရှိကြ၏။ အစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ: အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များ (1 AM 23 မှာပေါ်ထွန်း) တစ်ဦး 25 နာရီအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ် (12-7 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) စမ်းသပ်ထိန်းသိမ်းရေးမတိုင်မီ≥00တစ်ပတ်တိရစ္ဆာန်စက်ရုံမှ habituated နှင့်ရာသီဥတုထိန်းချုပ်ထားသောခန်း၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည် နှင့်ရေ ကြော်ငြာ libitum။ စမ်းသပ်ချက်အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းနှင့်သိနာတောင်ပေါ်မှာကော်မတီက (IACUC) ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် SCH5သို့မဟုတ် eticlopride Hydrochloride (20 mg / kg နှုန်း 10 ml, Tocris) (1-23390 / ကီလို 0.5 ကြွက်များအတွက် 1 ml, NIDA နှုန်း, ကြွက်များအတွက်μl mg) ကိုကင်းများအပါအဝင် IP ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်မြုံဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည် ။ stereotaxic ခွဲစိတ်ဘို့, ကြွက်မြုံဆားတစ် ketamine ၏ "ကော့တေး" (100 / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့် xylazine (10 mg / kg) (ဟင်နရီ Schein) နဲ့ anesthetized ခဲ့ကြသည်။
CaMKIIα (စုစုပေါင်း): အပေါ်ဘက်က 05-532, 1: 5,000
CaMKII phospho-Thr286: Promega V111A, 1: 1,000
ΔFosB (စုစုပေါင်း): ဆဲလ် signal 5G4, 1: 250
ΔFosB phospho-Ser27: Phosphosolutions, 1: 500
GluA1 (စုစုပေါင်း): Abcam, Ab31232, 1: 1,000
GluA1 phospho-Ser831: Millipore N453, 1: 1,000
GluA1 phospho-Ser845: Chemicon Ab5849, 1: 2,000
GluA2: Millipore 07-598, 1: 2,000
NR2A: Sigma HPA004692, 1: 2,500
NR2B: Millipore Ab1557P, 1: 1,000
အားလုံးစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ Prism ကို6software ကိုအထုပ် (GraphPad) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားရဲ့အ t-စမ်းသပ်မှု (t ကိုတနျဖိုးပေးထားသည်အဘယ်မှာရှိရလဒ်များအတွက်ညွှန်ပြ) အားလုံး pair တစုံပညာရှိနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်များနှင့်တလမ်း ANOVAs (F ကိုတနျဖိုးပေးထားသည်အဘယ်မှာရှိရလဒ်များကိုအပိုင်းများတွင်ညွှန်ပြ) အားလုံးမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
နာတာရှည်ကင်းသည့် NAc ရှဲလ်အတွက် CaMKII Induces
အတော်များများကလေ့လာမှုများကို (NAc shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက် MSNs အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့ခြင်းမှကွဲပြားခြားနားသောထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုရှိသည်သောညွှန်ပြခဲ့ကြKourrich နှင့်သောမတ်စ်, 2009; Loweth et al ။ , 2010) နှင့်နှစ်ဦးကိုငျဒသေ differential မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိကြောင်း (Ito က et al ။ , 2004) ။ NAc shell ကို၏ပရိုတိန်းမဲဆန္ဒနယ်မှအပေါ်ကိုကင်းများ၏ differential ကိုသက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်ရန် vs. အဓိကကျနော်တို့ multiplexing Isobaric နောက်လိုက်မှတ်သား (iTRAQ) နှင့်တွဲဖက်အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectroscopy (က MS / MS) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက် 20 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ်ကင်း (7 mg / kg) သို့မဟုတ်ဆားနှင့်အတူ IP ကိုထိုးသွင်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, ပြီးခဲ့သည့်ဆေးထိုး, NAc shell ကိုနှင့်အဓိကပြီးနောက် 24 နာရီ (microdissected ခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်း 1A) နှင့် flash ကိုအေးခဲ။ ဤအနမူနာများတွင်ပရိုတိန်းထို့နောက် iTRAQ သုံးပြီး quantified ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးလေးယောက် CaMKII isoforms core ကိုနှိုင်းယှဉ် NAc shell ကိုမှတိကျတဲ့ခဲ့ကင်းကုသမှုပြီးနောက်စကားရပ်အတွက်ကြီးမားသောတိုးပြသ။ ယခင်ကအခြားစနစ်များအတွက်အမျိုးမျိုးသော CaMKII အလွှာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြရသော PP1 catalytic နှင့်စည်းမျဉ်း subunits နှင့် PP2A အပါအဝင်အများအပြားပရိုတိန်း phosphatases, (Colbran, 2004), အလားတူပုံစံနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဝတ္ထု, ထို CaMKII အချက်ပြလမ်းကြောင်းအဓိကတစ် shell ကို-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ NAc အတွက်ကင်းအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းဘက်မလိုက်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။
ပိုပြီး quantitative ဒီတွေ့ရှိချက်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်အတွက်, ကျနော်တို့ (ကွဲပြားဆေးများမှာ) ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆားနှင့်အတူအထက်အဖြစ်ကြွက်ကုသပြီးကိုကင်းဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုတိုင်းတာသို့မဟုတ်ဆားစိန်ခေါ်မှုထိုး (5 / ကီလိုဂရမ် mg) ။ 10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းရန်ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့ locomotor အကဲဆတ်ခြင်းပုံမှန်ပုံစံအတွက်ရလဒ် (သင်္ဘောသဖန်း 1B) ။ ဒီဆေးထိုး regimen နှင့်အတူနောက်ထပ်လေ့လာမှုများ (ထပ်ခါတလဲလဲကင်းကင်း၏နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် NAc shell ကို 24 နာရီအတွက်ရွေးချယ်CaMKIIα induces ကြောင်း, အနောကျပိုငျးချေ၏အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုပုံထင်ရှားသင်္ဘောသဖန်း 1C နဲ့ D; p = 0.0019; F ကို = 7.943; DF = 29) ။ ထို့အပြင် AMPA အဲဒီ receptor ၏ GluA831 subunit ၏ canonical CaMKII အလွှာ Ser1 ၏ phosphorylation သိသိသာသာ NAc shell ကိုတိုးနှင့်မ core ကို (p = 0.0261; က F = 4.208; DF = 28) ခံခဲ့ရပါတယ်, CaMKIIα Thr286 autophosphorylation တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ခဲ့စဉ်သော်လည်းမ shell ကိုအတွက်သော induction ဆီသို့သိသိသာသာလမ်းကြောင်းသစ်သာ (သင်္ဘောသဖန်း 1D) ။ အခြားအချိုမှု receptors ထိခိုက်ခဲ့သညျ။ အဆိုပါ NAc နှင့် core ကို (DF = 0.0260 p = 4.189;; က F = 29) CaMKII ဤအစီအမံမတူဘဲ, တူညီတဲ့တစ်ရှူးနမူနာနှစ်ဦးစလုံးအခွံထဲမှာΔFosB၏ induction (;; က F = 0.0350 DF = 3.807 p = 29) ပြသ (သင်္ဘောသဖန်း 1C နဲ့ D(ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူ), တသမတ်တည်းPerrotti et al ။ , 2008).
နာတာရှည်ကိုကင်းကနေဆုတ်ခွာ၏ ~ 14 ရက်အကြာမှာတိရိစ္ဆာန်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ AMPA receptors ၏ကင်းစည်းမျဉ်းများအများအပြားကြိုတင်လေ့လာမှုများကတည်းက (ဆွေးနွေးချက်ကိုကြည့်ပါ) ကျနော်တို့ကဤထဲကဓာတုပစ်စညျးဒီအချိန်မှာကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးထပ်တလဲလဲ။ GluA14 Ser0.0288 ၏ CaMKII မဟုတ်သလို phosphorylation မတိုးလာနစေဉျ (ကျနော်တို့ 4.258 ရက်ပေါင်းကင်း၏နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်, ΔFosB NAc (DF = 22;; က F = 1 p = 831) တွင်မြင့်မားသောဖြစ်နေဆဲ, တွေ့ရှိခဲ့သင်္ဘောသဖန်း 1E) ။ နှင့် GluA1 Ser10 (p = 0.0330; က F = 3.947; DF = 26) ၏သို့သော်တစ်ခုတည်း 1 / စုစုပေါင်း CaMKII (;; က F = 831 DF = 0.0213 p = 4.509) ၏အဆင့်ဆင့်ကိုကင်းများ၏ကီလိုဂရမ်စိန်ခေါ်မှုထိုး MG 27 နာရီအကြာတွင် phosphorylation နှစ်ဦးစလုံး (ကနဦးနာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်တွေ့ရှိရကြောင်းနှင့်ဆင်တူနေတဲ့ဒီဂရီမှခြီးမွှောကျနေကြတယ်သင်္ဘောသဖန်း 1E) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ NAc shell ကိုအာရုံခံဖြစ်ကောင်း CaMKII ဗီဇကမကထတိုက်ရိုက် Prime မှတဆင့် abstinence ၏တိုးချဲ့ကာလ, (ဆွေးနွေးချက်ကိုကြည့်ပါ) စဉ်အတွင်း CaMKII သော induction အဘို့အရစေတယ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုမှတပါး, ΔFosBသော induction CaMKII သော induction ထက်ပိုမိုမြဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုယင်းဆွေးနွေးချက်ဖုံးလွှမ်းအဖြစ်, CaMKII စည်းမျဉ်းအပေါ်တစ်ဦး 'ဘရိတ် "ကွိုးစားအားထုကြောင်း, chromatin-based သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဖြစ်စေ, အပိုဆောင်းယန္တရားများ၏တည်ရှိမှုအကြံပြုထားသည်။
နောက်ထပ်ယင်းတွေ့ရှိချက်ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ကျနော်တို့ကုသိုလ်ကံမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပါဝင်ပတ်သက်နေသည့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမော်ဒယ်များ, စူးစမ်း။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များကိုကင်းဖို့တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ရှည်လျားဖြစ်စေ access ကိုပေးသည်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း (Ahmed ကနှင့် Koob, 1998), သာရှည်လျားသောလက်လှမ်းအခြေအနေများ (မူးယစ်ဆေးဝါး၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမြင့်တက်ဖို့ဦးဆောင်သင်္ဘောသဖန်း 2A) ။ ΔFosBရှည်လျားသောက သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိသွေးဆောင်ခဲ့သည် vs. နှင့် core ကို (p = 0.0011; က F = 11.12; DF = 17) NAc shell ကို (;; က F = 0.0004 DF = 13.86 p = 17) နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကိုကင်းဖို့တိုတောင်း access ကို။ ဆနျ့ကငျြ, CaMKIIα (သာကင်းရန်ကွာမွငျ့စှာ access ကိုအားဖြင့် NAc shell ကိုအတွက်သွေးဆောင်ခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း 2B နှင့် C; p = 0.0236; F ကို = 4.957; DF = 16) ။ ဒါဟာ (~ 12 / ကီလိုဂရမ် IV mg) Short-access ကိုတိရိစ္ဆာန်များကိုဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှနေ့စဉ်ကင်းစားသုံးမှုနှိုင်းယှဉ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှည်လျား-access ကိုတိရိစ္ဆာန်များ (~ 70 / ကီလိုဂရမ် IV mg), နှင့်စမ်းသပ်အုပ်ချုပ်ခွင့်တိရိစ္ဆာန်များ (10 / ကီလိုဂရမ် mg), နှင့် တိုတောင်းသော-access ကိုမသော်လည်းအဆုံးစွန်သောΔFosBနှင့် CaMKII ၏ကြံ့ခိုင်သော induction elicits အဘယ်ကြောင့်မေးကြည့်ပါ။ ဤသည်ကွာဟမှုကြောင့်အထွတ်အထိပ်ကိုကင်းအဆင့်ဆင့် (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကင်းမျိုးစုံ IV ဆေးများကနေတဆင့်ပို့သော်လည်းစမ်းသပ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကင်း, တစ်ခုတည်း bolus အိုင်ပီအဖြစ်ပေးထား) တွင်ခြားနားချက်များဖို့, ဒါမှမဟုတ်စမ်းသပ်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှု၏အရှည်ကွဲပြားခြားနားမှု (7 ရက်ပေါင်းအားဖြင့်ဖွယ်ရှိသည် Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်အုပ်ချုပ်ရေး, 19 ရက်ပေါင်း) ။
ကိုကင်းအရေးယူအတွက်ΔFosBနှင့် CaMKII အပေါ်ကြီးမားတဲ့စာပေနေသော်လည်း, လူ့ကင်းအသုံးပြုသူများအတွင်ဤပရိုတိန်းမရှိလေ့လာမှုများရှိပါသည်။ နှင့် CaMKII (p = 0.0316; t ကို = 1.921; DF = 34) (ကိုကင်း-မှီခိုလူသား NAc အတွက်တိုးမြှင့်နေကြသည်ဤတွင်ကျနော်တို့ΔFosB (;; t ကို = 0.0444 DF = 1.755 p = 32) နှစ်ဦးစလုံး၏အဆင့်ဆင့်သောပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားများကိုတင်ပြသင်္ဘောသဖန်း 2D, စားပွဲတင် 1) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုကြွက် NAc အတွက်ကင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ΔFosB၏စာမေးပွဲများနှင့် CaMKII သော induction လူ့ကိုကင်းစွဲဖို့ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာကြောင်းဖော်ပြသည်။
ΔFosB NAc ရှဲလ်၏ D1-အမျိုးအစား MSNs အတွက် CaMKII ကူးယူမှတ်တမ်းတင် selection ကိုထိန်းညှိ
CaMKII နှင့်ΔFosBနှစ်ဦးစလုံးဟာကြွက် NAc အတွက်ကိုကင်းများက upregulated ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါတွေ့ရှိချက်ΔFosBအဆိုပါ CaMKII ဗီဇ၏ကူးယူထိန်းညှိမယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အရင်က (NAc တစ်ခုဘက်မလိုက် microarray ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ΔFosBများအတွက်တတ်နိုင်သမျှပစ်မှတ်အဖြစ်CaMKIIαအစီရင်ခံခဲ့သည်McClung နှင့် Nestler, 2003), ဒါပေမဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်နောက်ထပ်ကြောင်းလေ့လာမှုမှာအတည်ပြုမခံခဲ့ရပါဘူး။ ကျနော်တို့ (ပထမΔFosBအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်၏ NAc အတွက်CaMKIIαဗီဇကမကထမှချည်နှောင်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် (qChIP-chip အရေအတွက် PCR အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်) အရေအတွက် chip ကိုအသုံးပြု, ဤ binding သိသိသာသာ shell ကိုအတွက်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအသုံးပြုပုံတိုးပွားလာကြောင်းသိသိသာသာတွေ့ရှိရ p = 0.0133; t ကို = 2.901; DF = 12), ဒါပေမယ့်မ core ကို, မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း (သင်္ဘောသဖန်း 3A) ။ နောက်ထပ်CaMKIIαကမကထမှ binding ΔFosB၌ဤမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း-တိကျတဲ့ခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်. ယန္တရားများကိုနားလည်စေရန်, ကြှနျုပျတို့သညျဤ Genomics ဒေသမှာ histone modfications ၏ပြည်နယ်တို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများမှ qChIP ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ မတိုင်မီကလေ့လာမှုများစုစုပေါင်း mouse ကို NAc (ထဲတွင်CaMKIIαကမကထမှာ H3 acetylation ၏ကင်းသော induction သရုပ်ပြဝမ် et al ။ , 2010) ။ ဆနျ့ကငျြ, ကျနော်တို့ (ကိုကင်းရွေးချယ် NAc core ကိုအတွက်CaMKIIαကမကထမှာ H3 acetylation လျော့ကျကြောင်းတွေ့ရှိရသင်္ဘောသဖန်း 3B; p = 0.0213; t = 2.726; DF = 10), ခညျြနှောΔFosBကျော်လွန်မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း-တိကျတဲ့ chromatin ပွောငျးလဲနှင့်ကိုက်ညီ shell ကိုအတွက်သိသာမျှပြောင်းလဲမှု, အတူ။ H3 lysine9(H3K9me2) dimethylated သည့်ဖိနှိပ်သောအမှတ်အသားဘို့ qChIP, (နှစ်ဦးစလုံးအခွံနဲ့ core ကိုငျဒသေတှငျအလျှောက်လျော့နည်းဘို့ခေတ်ရေစီးကြောင်းထင်ရှားသင်္ဘောသဖန်း 3C).
ΔFosBCaMKIIαကူးယူထိန်းညှိခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် Vivo အတွက်ကျနော်တို့ inducibly D1 အတွက်အထူးΔFosB overexpress နှစ်ခု bitransgenic mouse ကိုလိုင်းများအသုံးပြုသွားမည် vs. သောက်ရေအတွက် doxycycline အုပ်ချုပ်ရေးကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ထုံးစံ၌ D2-type အမျိုးအစား MSNs (ချန် et al ။ , 1998; Kelz et al ။ , 1999; Werme et al ။ , 2002) ။ (D1-type အမျိုးအစား MSNs အတွက်အများစုΔFosB overexpressing ကြွက်တွေမှာမတွေ့မမြင်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာ D0.0337-type အမျိုးအစား MSNs အတွက်ΔFosB overexpressing အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်သိသိသာသာ NAc အတွက်CaMKIIα mRNA ၏အဆင့်ဆင့် (DF = 1.996;; t ကို = 13 p = 2) တိုးမြှင့်ခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း 3D) ။ နှင့် core ကို (p = 1; t ကို D0.0030-type အမျိုးအစား MSNs အတွက်ΔFosBစကားရပ်အားဖြင့်သွေးဆောင်CaMKIIα mRNA အတွက်တိုး, NAc shell ကို (;; t ကို = 3.578 DF = 14 p = 0.0392) နှစ်ဦးစလုံးအတွက်CaMKIIαပရိုတိန်းတစ် concomitant တိုးဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည် = 2.275; DF = 14; သင်္ဘောသဖန်းသီး 3E နှင့် F) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာပေမယ့်, ΔFosBနှစ်ဦးစလုံးငျဒသေအတွက် D1-type အမျိုးအစား MSNs အတွက်CaMKIIαဗီဇစကားရပ်မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းကြောင်းသရုပ်ပြ ပုံ 3B အဆိုပါCaMKIIαကမကထမှာကင်း-mediated chromatin အပြောင်းအလဲများကို (ဥပမာလျှော့ချ acetylation) ကိုကင်းပြီးနောက် core ကိုမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက် CaMKII upregulating ထံမှΔFosBတားဆီးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Transgene mouse ကိုဒေတာ CaMKII ဗီဇစကားရပ်၏ osFosB သော induction NAc အတွက် D1-type ကို MSNs မှတိကျတဲ့ကြောင်းညွှန်ပြသောကြောင့်, ငါတို့လာမည့် CaMKII ၏ကိုကင်း - မှီခို upregulation အဆိုပါ D1 dopamine အဲဒီ receptor ၏ activation လိုအပ်သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရှာ၏။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များကိုယခင်ကကဲ့သို့နာတာရှည်ကိုကင်း (သို့) ဆားကိုသောက်သုံးခဲ့သော်လည်း၊ ဆေးတစ်ကြိမ်စီမတိုင်မီ ၃၀ မိနစ်၊ ကိုကင်းအုပ်စုရှိကြွက်များကိုအိုင်ပီဆေးထိုးခြင်း၊ (30 mg / kg) ။ နောက်ဆုံးဆေးကိုဆေးထိုးပြီးနောက် ၂၄ နာရီတိရိစ္ဆာန်များကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ Western blotting ကဖော်ပြသည်မှာ D1 သည် D23390 မဟုတ်ဘဲ D0.5 သည် osFosB ကိုတိုးပွားစေသည့်ကိုကင်း -mediated တိုးမြှင့်မှုကိုလုံးဝပိတ်ဆို့ခဲ့သည် (p <2; F = 0.5; df = 24) ။Nye et al ။ , 1995), အဖြစ် CaMKII အတွက် (p = 0.0005; က F = 10.99; DF = 18; သင်္ဘောသဖန်း 3G နှင့် H) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာကိုကင်းအထူးသ NAc shell ကို၏ D1-type အမျိုးအစား MSNs အတွက် CaMKII ဗီဇစကားရပ်ထဲမှာΔFosB-mediated တိုးပါဝငျသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်ဒီဦးနှောက်ဒေသအတွင်း CaMKII စကားရပ်အပေါ်ကိုကင်း၏ဤဆဲလ်-type အမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြအနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အရေးကြီးသောပါလိမ့်မယ်။
ΔFosB NAc ရှဲလ်အတွက် CaMKII ၏ကင်း induction များအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောကျနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်
bitransgenic ကြွက်၏အသုံးပြုမှုကိုဖြည့်ဖို့ကျနော်တို့လာမယ့်ကြွက်များတွင်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်CaMKIIα၏ကင်းသော induction ဖြန်ဖြေအတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသ adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ် (AAV) ΔFosBပေါင်း GFP သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်း GFP overexpress မှ (shell ကိုရွေးချယ်ပစ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်၏ NAc shell ကိုသို့ particles ထိုးသွင်း။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များထို့နောက် 10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းများ၏တစ်ခုတည်း IP ကိုဆေးထိုးပေးထားခဲ့ကြသည်။ ΔFosB / GFP overexpressing တိရစ္ဆာန် (တစ်ဦးတည်း GFP overexpressing တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးတိုးလာ locomotor တုံ့ပြန်မှုပြသင်္ဘောသဖန်း 4A) ။ တစ်ခုတည်းသောကိုကင်းဆေးထိုးပြီးနောက် 24 နာရီ, GFP-အပြုသဘော NAc တစ်ရှူးတစ်ချောင်းအလင်းအရင်းအမြစ်အောက်မှာခှဲစိတျဤတိရိစ္ဆာန်များကနေ excised ခဲ့သည်။ ဒီတစ်သျှူးများ၏အနောက်တိုင်းချေ (သင်္ဘောသဖန်း 4B နှင့် C) ခိုင်မာတဲ့ΔFosB overexpression အဖြစ် GFP တိရိစ္ဆာန်များ (p = 0.0070 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစုစုပေါင်းCaMKIIαပရိုတိန်းအတွက်သိသိသာသာတိုးထင်ရှား; နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူမြင်သော induction ဆင်တူ DF = 2.894), t ကို = 30 ။ ထို့အပြင်, (အင်ဇိုင်းကို Activation ၏ညွှန်ပြ) Thr286 မှာCaMKIIα autophosphorylation ΔFosB overexpression (; t ကို = 0.0330; p = 2.243 DF = 28) ကတိုးမြှင့်ခဲ့ CaMKII အလွှာ၏ phosphorylation ဖြစ်သကဲ့သို့, GluA831 ၏ Ser1 (p = 0.0540; t ကို = 2.012; DF = 28), နောက်တဖန်နာတာရှည်ကိုကင်းများ၏လုပ်ရပ်များန်းမှာ (သင်္ဘောသဖန်း 1C နဲ့ D) ။ T ကအတူတူ aken အဲဒီဒေတာ NAc shell ကိုအတွက်ΔFosBစကားရပ်ကိုကင်းဖို့ locomotor ာင်းနှင့်ဤမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက် CaMKII သော induction နှင့် activation များအတွက်လုံလောက်သောကြောင်းနောက်ထပ်သက်သေသာဓကသည်။
ကျနော်တို့ΔFosBအဆိုပါ NAc shell ကိုအတွက်CaMKIIα၏ကင်း-mediated သော induction အတွက်လည်းလိုအပ်သောရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အလားတူချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ AAV (ΔFosBမှတ်တမ်း activation တစ်အနုတ်လက္ခဏာထိန်းညှိသော, တစ်ဦးခြင်းကို JunD ပရိုတိန်း overexpress ဖို့အသုံးပြုΔJunDချေါခဲ့သည်Winstanley et al ။ , 2007) ပေါင်း GFP သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်း GFP ။ Transgene စကားရပ်အကျယ်ချဲ့အခါနှစ်ပတ်အကြာ, တိရိစ္ဆာန်များ 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ်ကင်း (7 / ကီလိုဂရမ် mg) သို့မဟုတ်ဆားပေးထားသောနှင့်ကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုမှ locomotor တုံ့ပြန်မှုအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြ (5 / ကီလိုဂရမ် mg) ကိုပြီးခဲ့သည့်နာတာရှည်ဆေးထိုးပြီးနောက် 24 နာရီ (သင်္ဘောသဖန်း 4D) ။ ΔJunD overexpression ကင်းဖို့ locomotor ာင်းတားဆီးများနှင့်လည်း (NAc shell ကိုအတွက်CaMKIIαသော induction နှင့် activation တားဆီးသင်္ဘောသဖန်း 4E နှင့် F; p = 0.0437; F ကို = 2.997; စုစုပေါင်း DF = 38), ΔFosBမှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုကဤမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက်CaMKIIα၏ကင်း-mediated သော induction များအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းညွှန်ပြ။ ΔFosB၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စကားရပ်အဆင့်ဆင့်အဘို့အ AP-0.0004 လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူတည်ကြောင်းဝတ္ထုဖြစ်နိုင်ခြေပြုစုပျိုးထောင်, စိတ်ဝင်စားစရာ, ငါတို့ΔJunDဆားနှင့်ကိုကင်း-ကုသအခြေအနေများနှစ်ဦးစလုံးအောက်မှာΔFosB၏အဆင့်ဆင့်လျှော့ချတွေ့ရှိခဲ့ (DF = 8.110 p = 35;; က F = 1) ။
CaMKII Ser27 မှာΔFosB Phosphorylates
အသုံးပြုခြင်း စသည်တို့အတွက် ပရိုတိန်း kinase assay ကျနော်တို့သန့်ΔFosBCaMKIIαများအတွက်အားကောင်းတဲ့အလွှာကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။ သူ့၏ပေါက်ဖွား6CaMKIIαနှင့် ATP နှင့်အတူ-ΔFosBΔFosB၏ electrophoretic mobility (တစ်ခုအထက်သို့ပြောင်းကုန်ပြီစေသောသင်္ဘောသဖန်း 5A); အဆိုပါအများအပြားရရှိလာတဲ့ခညျြအနှော phosphorylation ၏မျိုးစုံက်ဘ်ဆိုက်များအကြံပြုသည်။ တူသော စသည်တို့အတွက် [γ-သုံးပြီး kinase assay32: P] ATP ဟာပြောင်းလဲΔFosBခညျြအနှော (သို့ radiolabeled ဖော့စဖိတ်၏ဆွဲသွင်းပါဝင်ပြသသင်္ဘောသဖန်း 5B), ပရိုတိန်း၏တိုက်ရိုက် phosphorylation ဆန္ဒပြနေသော။ ကျနော်တို့ΔFosB၏ယခင်ကသွင်ပြင်လက္ခဏာ Ser27 (တစ် phospho-တိကျတဲ့ antibody ကိုထုတ်လုပ်ပြီးUlery et al ။ , 2006) ။ ဒီ antibody ကို Ser27-phosphorylated ΔFosB (Data ပြမဟုတ်) ဆံ့ကြောင်းဦးနှောက်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူဆန့်ကျင်နေတဲ့ signal ကိုထုတ်လုပ်ရန်ပါဘူးနေချိန်မှာကျနော်တို့အတွက် Ser27 phosphorylation detect နိုင်ခဲ့ကြတယ် စသည်တို့အတွက် CaMKII သုံးပြီး kinase assay (သင်္ဘောသဖန်း 5B) ။ ΔFosB၏ CaMKII phosphorylation ၏ Kinetic ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (က kinase များအတွက်အစွမ်းထက်အလွှာကြောင်းကိုညွှန်ပြသင်္ဘောသဖန်း 5C), တစ်ခုသိသာ K သည်နှင့်အတူM 5.7 ±2.0μMနှင့် K ၏CAT 2.3 ± 0.3min ၏-1။ ဤရလဒ်သည်အများအပြားကောင်းစွာ-စရိုက်လက္ခဏာတွေမှနှိုင်းယှဉ်များမှာ Vivo အတွက် CaMKII ၏အလွှာ (Colbran နှင့်ဘရောင်း, 2004) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ (CaMKII 2.27 ± 0.07 mol / mol တစ် stoichiometry နှင့်အတူΔFosB phosphorylates ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်သင်္ဘောသဖန်း 5D), CaMKII phosphorylation အနည်းဆုံးသုံးဆိုဒ်များအတွက်သူ့အတွင်းရှိတယ်လို့ညွှန်ပြ6အတူသဘောတူညီချက်အတွက်-ΔFosBပရိုတိန်း, သင်္ဘောသဖန်း 5A.
phosphorylation ၏တစ်ဦးချင်းစီက်ဘ်ဆိုက်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, ငါတို့ထံမှနမူနာ၏က MS ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအလုပ် စသည်တို့အတွက် kinase assay ။ သင်္ဘောသဖန်း 5E ယခင်ကသွင်ပြင်လက္ခဏာ Ser27 မှာအများအပြားထပ်တိုးက်ဘ်ဆိုက်များ (Data ပြမဟုတ်) မှာΔFosB phosphorylation ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ Ser27 ၏ကြိုတင်အလုပ်လုပ်တဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေပေးထားကျနော်တို့ Ser27 ၏ phospho- နှင့် nonphospho-ပြည်နယ်များန်းမှာတံဆိပ်ကပ်ဒြပ် peptides ထုတ်လုပ်ဖွငျ့ဤ site ပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက် MRM အတွက်စံချိန်စံညွှန်းများမတိုင်မှီနဲ့အပြီးΔFosB၏လေ့လာဆန်းစစ်အဖြစ်အဲဒီ peptides ၏လူသိများပမာဏကိုအသုံးပြု စသည်တို့အတွက် CaMKII အားဖြင့် phosphorylation ။ နောက်ဆက်တွဲ quantitative (သင်္ဘောသဖန်း 5F) Ser27 CaMKII များအတွက်အစွမ်းထက်အလွှာကြောင်းအတည်ပြု။ ဤရလဒ်သည်ΔFosBအတွင်းမျိုးစုံ phosphorylated အကြွင်းအကျန်များတို့တွင်အ Ser27 CaMKII များအတွက်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သောအလွှာဖြစ်ပါသည်, ကဖော်ပြသည်။
CaMKII အဆိုပါ NAc ရှဲလ်အတွက်ΔFosB၏ကင်းစုဆောင်းခြင်း Mediates
CaMKII ΔFosB phosphorylate နိုင်ပါတယ်ကတည်းက စသည်တို့အတွက် သိသိသာသာ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုတိုးမြှင့်ကြောင်း site တစ်ခုမှာ စသည်တို့အတွက် နှင့် Vivo အတွက် (Ulery et al ။ , 2006; Ulery-Reynolds က et al ။ , 2009), ကျနော်တို့ CaMKII လှုပ်ရှားမှု NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ထား Vivo အတွက်။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး NAc (အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင်CaMKIIα (T286D) ၏ကယ်လစီယမ်-လွတ်လပ်သော Mutant overexpressing မောက်လိုင်းအသုံးပြုသောMayford et al ။ , 1996; Kourrich et al ။ , 2012) ။ ကျနော်တို့တနေ့နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့, 20 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်ချိန်ကနေ့စဉ်ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဆား / MG 14 နှင့်အတူအသက်-လိုက်ဖက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Mutant နှင့် wildtype littermates ထိုးသွင်း။ (အမာခံပေမယ့်မရကျနော်တို့ΔFosB၏ Basal အဆင့်ဆင့် NAc shell ကိုအတွက် Mutant တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးပွားလာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ (DF = 0.0001 p = 9.207;; က F = 37)သင်္ဘောသဖန်း 5G နှင့် H) ။ အံ့သြစရာကောင်းတာကΔFosB၏ကင်း-မှီခိုသော induction CaMKII တိုက်ရိုက် NAc shell ကိုအတွက်ΔFosBတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းညှိနိုင်ပေမယ့်, ကလည်းနှစ်ဦးစလုံး NAc ငျဒသေအတွက်ကိုကင်း-activated လမ်းကြောင်းအတွက်အထက်ΔFosB၏အိပ်ရစေခြင်းငှါ, အကြံပြု, shell ကိုနှင့် core ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက် Mutant တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည် ။
(NAc MSNs အပေါ် dendritic ကျောရိုး၏ကင်းသော induction ဒီဦးနှောက်ဒေသအတွက်အကောင်းဆုံးထူထောင်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောကျောရိုးသော induction မူးယစ်ဆေးထိခိုက်မခံတဲ့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်Robinson နဲ့ Kolb, 2004; Russo et al ။ , 2010) နှင့် D1-type အမျိုးအစား MSNs များအတွက်ရွေးချယ်ဖြစ်သတင်းပို့ (Lee က et al ။ , 2006) ။ ကျနော်တို့ (NAc အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ကင်းသော induction ΔFosBနှင့်၎င်း၏မြစ်အောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းအစီအစဉ်ကိုမှီခိုကြောင်းမကြာသေးမီကသရုပ်ပြပါပြီဝင်္ et al ။ , 2010) ။ သည်အခြားဦးနှောက်ဒေသများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲစနစ်များ (ထဲမှာ dendritic ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အသော induction အတွက် CaMKII များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုရည်မှတ်ကာကျယ်ပြန့်စာပေလည်းမရှိသော်လည်းJourdain et al ။ , 2003; Penzes et al ။ , 2008; Okamoto et al ။ , 2009), NAc MSN ကိုကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာခဲ့ရသေးပါ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ CaMKII လှုပ်ရှားမှု GFP မှ fused အဆိုပါ CaMKII inhibitor peptide AC3I ယခင်က CaMKII လှုပ်ရှားမှုတားစီးပြနေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေး HSV-mediated overexpression အသုံးချဖို့အားဖြင့် MSN ကို dendritic ကျောရိုး၏ΔFosB-mediated သော induction ဘို့လိုအပ်ပါသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ထား Vivo အတွက် (Zhang က et al ။ , 2005; Klug et al ။ , 2012) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များ၏ NAc shell ကိုအတွက် osFosB ၏ alFosB ၏ဗိုင်းရပ်စ် overexpression MSN dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်သိသိသာသာတိုးသွေးဆောင် (p <0.0001; F ကို = 8.558; df = 59; သင်္ဘောသဖန်း 6A နှင့် B) ယခင်ကအစီရင်ခံအဖြစ် (ဝင်္ et al ။ , 2010), ဤတိုး (p = 0.0027 ပါးလွှာခြင်းဖြင့်အဓိကအားဖြင့်မောင်းနှင်လေ၏က F = 5.319; DF = 59) နှင့်ပေးသော Stubby (p = 0.0378; က F = 2.988; DF = 59) ကျောရိုးအမျိုးအစားများ (နုကျောရိုးဖြစ်ထင်နှစ်ဦးစလုံး) (သင်္ဘောသဖန်း 6C-E) ။ အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပိုပြီးရင့်ကျက်, မှို-shaped ကျောရိုးပေါ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ GFP-AC3I coexpressed သောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ကျောရိုး၏ΔFosBသော induction လုံးဝ (ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း 6A-E), CaMKII လှုပ်ရှားမှု NAc shell ကိုအတွက် dendritic ကျောရိုး၏ΔFosBသော induction လိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြ။
ကျနော်တို့လာမယ့် CaMKII လှုပ်ရှားမှုကင်းရန်အမူအကျင့် sensitivity ကိုအပေါ်ΔFosBရဲ့သက်ရောက်မှုများအတွက်လိုအပ်သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်တူညီသောဗိုင်းရပ် tools တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ NAc shell ကိုသို့ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုးပြီးနောက် 72 နာရီ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်5၏တစ်ခုတည်းသောဆေးထိုးမီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းနှင့်၎င်းတို့၏ locomotor လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကΔFosBပိုမိုတိုးချဲ့ AAV overexpression နှင့်အတူပြထားတဲ့အတိုင်း (သင်္ဘောသဖန်း 4AF ကို = 0.0002;;), ΔFosB၏ HSV-mediated overexpression ကင်းဖို့ locomotor sensitivity ကို (p = 8.823 တိုးလာ DF = 37; သင်္ဘောသဖန်း 6F) ။ dendritic ကျောရိုး၏ induction နှင့်ဝသကဲ့သို့, GFP-AC3I ၏ coexpression အားဖြင့် CaMKII လှုပ်ရှားမှု၏တားစီးလုံးဝ CaMKII လှုပ်ရှားမှုကင်းရဲ့အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက်ΔFosB-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲဘို့လိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြ, ကိုကင်း sensitivity ကိုအတွက်ΔFosB-mediated တိုးပိတ်ဆို့။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကိုကင်း NAc shell ကိုအတွက်ရွေးချယ်သည့်CaMKIIαဗီဇ၏ကူးယူ upregulates ရာ NAc အတွက်ΔFosB, induces ဘယ်မှာဝတ္ထု feed ကို-ရှေ့ဆက်ယန္တရား delineates. CaMKIIαနောက်ပိုင်းတွင် (ΔFosB သာ. ကြီးမြတ်ΔFosBစုဆောင်းခြင်းနှင့်ထပ်မံCaMKIIαသော induction မှဦးဆောင် phosphorylates နှင့်တည်ငြိမ်သင်္ဘောသဖန်း 6G) ။ ကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုကာလအတွင်းနှစ်ခုပရိုတိန်း၏ Co-မြင့်တက်အဆင့်ဆင့်ထို့နောက်မူးယစ်ဆေးဝါးမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု sensitized ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနည်းလမ်းများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေ။ ဤသည်ΔFosBနှင့် CaMKII နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီကိုကင်းမှတိုးမြှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ခံရဖို့ယခင်ကသရုပ်ပြခဲ့ကြသကဲ့သို့အထူးသဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်ယူဆချက်ဖြစ်ပါသည် (ပီယပ် et al ။ , 1998; Peakman et al ။ , 2003), နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အထူးသ (ကဗိုင်းရပ်စ်ချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြု. NAc shell ကိုအတွက်ΔFosBအဘို့ဤတွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားသင်္ဘောသဖန်းသီး4နှင့် and66).
D1-type အမျိုးအစား MSNs အတွက် Transgene ΔFosB overexpression, ကိုကင်းများ၏အခြေအနေတွင်, ကိုကင်း-ရင်တော့မှားမယ်တိရစ္ဆာန်များ၏ NAc shell ကိုနှင့် core ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးငျဒသေအတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသော endogenous ΔFosB၏စုဆောင်းခြင်း CaMKII သော induction မောင်းနိုငျသျောလညျး NAc shell ကိုအတွက်အထူး CaMKII ၏ induction မောင်း ။ ဤသည်ခြားနားချက်ကျွန်ုပ်တို့၏ bitransgenic မော်ဒယ်အတွက်သွေးဆောင်ΔFosB၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်း, သို့သော်, ဒါကြောင့်လည်း differential shell ကိုအတွက်CaMKIIαကမကထပြောင်းလဲပစ်ရန်ကိုကင်းများ၏စွမ်းရည်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ, vs. ယခင်အတွက် binding ΔFosBမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်အဆုံးစွန်သောမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းထဲမှာထုတ်ပယ်ဖို့ဖြစ်စေ core ကို MSNs ။ တကယ်တော့ကိုသာ NAc core ကိုအတွက်CaMKIIαဗီဇကမကထမှာ histones တစ်ဦးကိုကင်း-mediated deacetylation ထုတ်ဖေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chip ဒေတာ, တစ် chromatin ယန္တရားရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုထောကျပံ့။ ဒီအယူအဆနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌, D1-type အမျိုးအစား MSNs အတွက်ΔFosB overexpression (ကိုကင်းများ၏မရှိခြင်းအတွက် NAc core ကိုအတွက်CaMKIIαသော induction မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်သင်္ဘောသဖန်း 3F), နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့မှုကာလအတွင်းကဒီ induction တားဆီးသောCaMKIIαကမကထ၏တက်ကြွပြုပြင်မွမ်းမံရှိပါတယ်အကြံပြုခြင်း။ CaMKII နာတာရှည်ကင်း-ဆုတ်ခွာကြွက်၏ NAc shell ကို (အတွင်းကိုကင်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်သည်ကိုအဘယျကွောငျ့ CaMKII ကမကထမှာ chromatin ရှုခင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုလည်းရှင်းပြပါလိမ့်မယ်သင်္ဘောသဖန်း 1E) သော်လည်းမဆေးကဲ့သို့ပင်ထိရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိရတိရစ္ဆာန်များ၏ (သင်္ဘောသဖန်း 1D) ။ ဤသည်ΔFosBတစ်ခုဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု "မျိုးဗီဇ priming" အကျိုးသက်ရောက်မှု (ကိုယ်စားပြုနိုင်Robison နှင့် Nestler, 2011) နှင့်အရှင် (ကိုကင်းတဏှာ၏ထိုပေါက်ဖွားတွေထဲကမော်လီကျူးယန္တရားဖြစ်စေခြင်းငှါ,Pickens et al ။ , 2011) ။ ဒီ chromatin ပြောင်းလဲမှုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်တဏှာ၏ပေါက်ဖွားဆက်စပ်ခံရဖို့အတှကျသျောလညျး, ဒါကြောင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးမြှင့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်အခြားမျိုးဗီဇကိုကင်းများကΔFosB-မှီခို, မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း-တိကျတဲ့စည်းမျဉ်းကိုပြသရှိမရှိလေ့လာဖို့။ ဒါဟာ (ကြှနျုပျတို့ကိုဖော်ပြရန်အတွက် feed ကို-ရှေ့ဆက်ကွင်းဆက် CaMKII သို့မဟုတ်ΔFosBတစ်ခုအဆုံးမဲ့စုဆောင်းခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမထားဘူးသတိပြုပါရန်လည်းအရေးကြီးပါသည်သင်္ဘောသဖန်း 1E); ဒီအတှကျတာဝနျရှိမော်လီကျူး "ဘရိတ်" ဖုံးကွယ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများ၏အရေးပါသောရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အများအပြားစမ်းသပ်စနစ်များနှင့်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosBနှင့် CaMKII ၏လူသိများလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအများအပြားအဆင့်ဆင့်မှာဆုံ (သင်္ဘောသဖန်း 6F) ။ နှစ်ဦးစလုံးမော်လီကျူးရငျးနှီး dendritic ကျောရိုးတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်: CaMKII (ထို actin cytoskeleton နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်Okamoto et al ။ , 2009), ကျောရိုးဦးခေါင်းအရွယ်အစား (ထိန်းညှိMatsuzaki et al ။ , 2004), နှင့်လိုအပ်သောနှင့် hippocampal organotypic အချပ်ယဉ်ကျေးမှုအတွက် filopodia နှင့် synapses အရေအတွက် plasticity-သွေးဆောင်တိုးဘို့လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ် (Jourdain et al ။ , 2003), while ΔFosB (NAc MSNs အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်ဝင်္ et al ။ , 2010) ။ ထို့အပြင်နှစ်ဦးစလုံးမော်လီကျူး AMPA အချိုမှု receptors ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ဆက်စပ်ပါပြီ။ CaMKII AMPA အဲဒီ receptor subunits စုစုပေါင်းအဆင့်ဆင့်ထိန်းညှိ, ဒါပေမယ့် synapses သို့ AMPA receptors တွေရဲ့သွင်းမောင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအတွက် hippocampal ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအတွက် Ser1 မှာ GluA831 phosphorylating အားဖြင့် AMPA ရုပ်သံလိုင်း conduction တိုးပွါးမ Vivo အတွက် ((အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ်Malinow နှင့် Malenka, 2002; Colbran နှင့်ဘရောင်း, 2004)) ။ အဆိုပါ synapses မှ GluA1 ၏ထိုကဲ့သို့သောတိုးလာလူကုန်ကူးမှု (အဖြစ်ကောင်းစွာနာတာရှည်ကင်းအရေးယူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးBoudreau နှင့် Wolf က, 2005) ။ ထိုမှတပါး, NAc အတွက် AMPA အဲဒီ receptor activation မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု (က D1 dopamine အဲဒီ receptor-မှီခိုထုံးစံ၌CaMKIIα overexpression နေဖြင့်တိုးမြှင့်နေကြသည်အဆိုတော် et al ။ , 2010) ။ ΔFosB၏ရေရှည် D1-တိကျတဲ့ overexpression (NAc အတွက် GluA2 ကူးယူသွေးဆောင်ပြထားပြီးKelz et al ။ , 1999), ကျနော်တို့တိုတောင်း-သက်တမ်းΔFosB overexpression-အဖြစ်ပိုမိုတိုတောင်း-သက်တမ်းကိုကင်းကဒီ subunit မသက်ရောက်ထိတွေ့-ရှိသည်သောကဒီမှာပြသနေစဉ်, GluA1 မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ AMPA တုံ့ပြန်မှု dampens ရာ (သင်္ဘောသဖန်း 1) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကျနော်တို့ (ရေတိုရေရှည်ΔFosB overexpression လက်ထက် NAc အတွက် D1-type အမျိုးအစား MSNs အတွက် AMPA တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းစေကြောင်းမကြာသေးမီကတွေ့ပြီGrueter et al ။ , 2013) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုသေးကောင်းစွာနားမလည်စွဲတိုးတက်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်အခြေခံကြောင်းကင်းဖို့ neuroadaptations နေတဲ့အချိန်-မှီခိုစီးရီးဖွဲ့စည်းစေမည်အကြောင်းယာယီကွဲပြားယန္တရားများအကြံပြုအပ်ပါသည်။ (ထိုအမူအကျင့်အဆင့်မှာ, CaMKII နှင့်ΔFosBနှစ်ဦးစလုံး (အထကျကိုကြည့်ပါ) ကိုကင်းဖို့ locomotor ာင်းလိုအပ်သည်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးကြွက်များတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်လိုအပ်သည်Colby et al ။ , 2003; ဝမ် et al ။ , 2010), တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကွဲပြားနောက်ခံယန္တရားများမှတဆင့်ဆိုသော်ငြားနှစ်ခုပရိုတိန်း, မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ရန်ရေတိုနှင့်ရေရှည်အပြုအမူအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်နှစ်ခုလုံးအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု။ အများကြီးနောက်ထပ်အလုပ်တိုက်ရိုက်အပြုအမူပြောင်းလဲမှု Synaptic ဖြစ်ရပ်ချိတ်ဆက်လိုအပ်ပေမယ့်ယူဆရ, ΔFosBနှင့် CaMKII, NAc Synaptic function ကိုပြောင်းလဲမှုများမှတဆင့်ထိုကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ထိန်းညှိ။
အဆိုပါ CaMKII holoenzyme တစ်ပြိုင်နက် (synapses-ဆက်စပ်ပရိုတင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်Robison et al ။ , 2005) ၎င်း၏ postsynaptic သိပ်သည်းဆ (PSD) ကိုပစ်မှတ်ထားထိန်းညှိဖို့ထင်ထားတဲ့တစ်ဖြစ်ရပ်ဆန်း Synaptic plasticity များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်အကြံပြုသည်။ အထူးသဖြင့်, ထို NMDA-type အမျိုးအစားအချိုမှု receptor ၏ GluN2B subunit နှင့်အတူ CaMKII များ၏အပြန်အလှန်မကြာသေးမီကနှစ်ဦးစလုံး Synaptic plasticity ထိန်းညှိရန်ပြသခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းခဲ့သည် (et al ရပ်တန်။ , 2012) ။ CaMKII ၏ autoinhibitory ဒိုမိန်းအတွက် AC3I peptide တူတဲ့နေစဉ်, ဤသို့တားစီး catalytic လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လည်းလုပ်ကွက် enzyme မျိုးစုံပရိုတိန်း-ပရိုတိန်း interaction က (Strack et al ။ , 2000; Robison et al ။ , 2005) ။ ထို့ကြောင့် HSV-GFP-AC3I ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံ၏အမူအကျင့်များနှင့် morphological သက်ရောက်မှု CaMKII ပစ်မှတ်ပရိုတိန်း, CaMKII ပစ်မှတ်ပြောင်းလဲမှုများ, ဒါမှမဟုတ် synapses မှာ CaMKII ရဲ့အဆိုပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခု (များ၏လျှော့ချ phosphorylation မှတဆင့်ပေါ်ပေါက်နိုင်Lisman et al ။ , 2002).
မကြာသေးမီအလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်မလိုက် iTRAQ (စားပွဲတင် S1) ဒေတာကအတည်ပြုတဲ့အယူအဆကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် NAc shell ကိုနှင့်အဓိကအကြားအတော်ကြာဇီဝကမ္မကွဲပြားခြားနားမှုသရုပ်ပြထားပါတယ်အဖြစ် NAc shell ကိုရန်အဆိုပြုထားΔFosB-CaMKII ကွင်းဆက်၏ကန့်သတ်, အထူးမှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည် ။ တူတိရစ္ဆာန်များအနေဖြင့်အဓိက MSNs 1 ရက်သတ္တပတ်အတွင်း Basal အဆင့်ဆင့်ကို ပြန်. စွမ်းရည်ပစ်ခတ်အတွက်ယာယီ (3-2 နေ့က) တိုး (ဖော်ပြရန်စဉ် NAc shell ကိုအတွက် MSNs, ပတ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ကြောင်းနာတာရှည်ကင်းပြီးနောက်စွမ်းရည်ပစ်ခတ်အတွက်စိတ်ကျရောဂါကိုပြသKourrich နှင့်သောမတ်စ်, 2009) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြောက်မြားစွာ Synaptic ပရိုတိန်း differential NAc shell ကိုအတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည် vs. GluA2 အပါအဝင်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့တိရစ္ဆာန်များ၏အမာခံ, (Knackstedt et al ။ , 2010) ။ နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေး NAc shell ကိုအတွက်အထူးCaMKIIα induces အဖြစ် (Loweth et al ။ , 2010), ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုကင်းနဲ့ဆင်တူအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှာဖွေကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ΔFosB (နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့် NAc shell ကိုနှင့် core ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သွေးဆောင်နေသည်အဖြစ်Perrotti et al ။ , 2008ကျနော်တို့ shell ကိုအတွက်CaMKIIαသော induction ΔFosB-မှီခိုကြောင်းပြသချိန် မှစ. ), နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် shell ကိုအတွက်CaMKIIαများ၏ရွေးချယ်သော induction တာဝန်ရှိသည်သောဤနှစ်ခုငျဒသေအကြားCaMKIIαကမကထမှာကွဲပြားမှတ်တမ်းယန္တရားများ, အသစ်သက်သေအထောက်အထားသည်။
မကြာသေးမီအလုပ်၏တစ်ဦးကအလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက် D1- နှင့် D2-type အမျိုးအစား NAc MSNs အကြားကွဲပြားခြားနားမှု delineating အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ D1 နှင့် D2 နှစ်ဦးစလုံး receptors ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သော်လည်း (ကိုယ်ပိုင်, 2010), မကြာသေးမီအလုပ် D1-type အမျိုးအစား MSN ကို activation ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်စဉ် D2-type အမျိုးအစား MSNs ၏ optogenetic activation (ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတိုးပွါးကြောင်းပြသLobo et al ။ , 2010) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, D1-receptor နောက်ကောက်ကြွက် (ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူအတွက်လစ်လပ်များမှာကာဣန et al ။ , 2007), D2 နောက်ကောက်မဟုတ်နေစဉ် (ကာဣန et al ။ , 2002) ။ တိုက်ရိုက် NAc သို့ D1 agonist အုပ်ချုပ်ရေး (reinstatement Paradigm အတွက်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကိုယ်ပိုင်, 2010) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကို (NAc shell ကိုအတွက် CaMKII လှုပ်ရှားမှုအတွင်း D1-receptor-မှီခိုတိုးလိုအပ်သော်လည်းအဓိကမဟုတ်Anderson က et al ။ , 2008), အ D1- နှင့် shell ကို-တိကျတဲ့ΔFosB-CaMKII ကွင်းဆက်နှင့်အတူကြင်အံတဲ့ရလဒ်ကဒီမှာအဆိုပြုထား။
ကျနော်တို့အရင်ကΔFosBအတွက် Ser27 casein kinase-2 (ဖွငျ့ phosphorylated နိုင်အစီရင်ခံတင်ပြUlery et al ။ , 2006), သို့သော်ကျနော်တို့ CaMKII ဒီဝေး သာ. ကြီးမြတ် kinetics နှင့် stoichiometry နှင့်အတူတခြားဆိုက်များမှာΔFosB phosphorylates နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသိသာ M ကိုပုံတူပွားနိုင်သောဤနေရာတွင်တည်ထောင်ရန်r (ΔFosBများအတွက်လေ့လာသင်္ဘောသဖန်း 5A) ကိုကင်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူ Vivo အတွက် (Nestler, 2008) ။ ကျနော်တို့ပြီးသား (ထို Ser27 phosphorylation တိုးΔFosBတည်ငြိမ်မှုနှင့်မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုကိုသိရUlery et al ။ , 2006; Ulery နှင့် Nestler, 2007; Ulery-Reynolds က et al ။ , 2009) ။ အနာဂတ်အလုပ်ယခုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများကညွှန်ပြΔFosB phosphorylation ၏ဝတ္ထုက်ဘ်ဆိုက်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့ feed ကို-ရှေ့ဆက်ကွင်းဆက်ကိုကင်းများ၏အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် NAc အတွက်တိုးတက်သောမူမမှန်မောင်းထပ်ခါတလဲလဲပေးသောအားဖြင့်တစ်ဦးယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်အသစ်သောယန္တရားပေးပါသည်။ ကဲ့သို့သော, ဒီထဲကဓာတုပစ်စညျးလမ်းကြောင်းစွဲလမ်းမမှန်အတွက်အနာဂတ်ကုထုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်အရေးပါသောပစ်မှတ်များကိုဖြစ်နိုင်သည်။ CaMKII နေရာအနှံ့နှင့်များစွာသော Basal အာရုံခံခြင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လိုအပ်သောကြောင့် CaMKII inhibitors တိုက်ရိုက်အသုံးပြုမှုတစ်ခုစွဲကုသမှုအဖြစ်ကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry ၏တစ်ဦးချင်းဆဲလ်အမျိုးအစားနှင့်မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းမှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သော CaMKII သော induction ၏ယန္တရားပိုမိုသိမ်မွေ့သတ်မှတ်ခြင်း, စနစ်တကျ CaMKII တားစီး၏ဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားလိမ့်မယ်လို့တစ်ကုထုံးပစ်မှတ်များကိုနိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (EJN) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေ, NIDA-ယေးလ် Proteomics Center က DA018343 (AJR နှင့် EJN), နှင့် Hartwell ဖောင်ဒေးရှင်း (AJR) ကထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာသန့်CaMKIIα၏ရက်ရက်ရောရောဆုကြေးဇူးကိုအဘို့စင်ကြယ်စေΔFosBနှင့်ရော်ဂျာ Colbran ၏ရက်ရက်ရောရောဆုကြေးဇူးကိုအဘို့အ Gabby Rundenko ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
အန်ဒါဆင်သည် SM, နာမည်ကြီး KR, Sadri-Vakili, G, Kumaresan V ကို, Schmidt က HD ကိုဘေ့အီး, Terwilliger EF, Cha JH, ပီယပ် RC ။ CaMKII: ကင်းရှာထဲမှာ accumbens dopamine နဲ့အချိုမှုစနစ်များကိုချိတ်ဆက်နေတဲ့ထဲကဓာတုပစ်စညျးတံတား။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 344-353 ။ [PubMed]
Boudreau AC အ, ME Wolf ။ ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်ာင်းနျူကလီးယပ် accumbens အတွက်တိုးမြှင့် AMPA အဲဒီ receptor မျက်နှာပြင်စကားရပ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 9144-9151 ။ [PubMed]
Brickey DA, Colbran RJ, Fong သည် YL, Soderling TR ။ Ca2 အဆိုပါ baculovirus စကားရပ်စနစ်အား အသုံးပြု. + / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ကို၏ alpha-subunit ၏ expression နဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community ။ 1990; 173: 578-584 ။ [PubMed]
ကာဣန SB, Negus အက်စ်အက်စ်, Mello NK, Patel က S နဲ့, Bristow L ကို, Kulagowski J ကို, Vallone: ​​D, Saiardi တစ်ဦး, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors ၏ Borrelli အီးအခန်းက္ပ: D2 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်နှင့်ဝတ္ထု D2 အဲဒီ receptor နှင့်အတူလေ့လာမှုများ ရန်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 2977-2988 ။ [PubMed]
ကာဣန SB, Thomsen M က, ဂါဗြေလ KI, Berkowitz JS, ရွှေ LH, Koob gf, Tonegawa က S, Zhang က J ကို, dopamine D1 အဲဒီ receptor ခေါက်ထွက်ကြွက်တွေမှာကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး Xu အမ်မရှိခြင်း။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 13140-13150 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Carl TL, Ohnishi yn, Ohnishi YH, Alibhai IN, Wilkinson ကို MB, Kumar ကတစ်ဦး, Nestler EJ ။ FosB တည်မငြိမ်ဖြစ်စေဘို့ Proteasome-မှီခိုနှင့် -independent ယန္တရားများ: DeltaFosB တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက် FosB degron domains များနှင့်ဂယက်ရိုက်၏မှတ်ပုံတင်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 25: 3009-3019 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Kelz ကို MB, Zeng, G, Sakai က N ကို, Steffen ကို C, Shockett PE, Picciotto MR, Duman RS, Nestler EJ ။ ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်, ပစ်မှတ်ထားဗီဇစကားရပ်နှင့်အတူ Transgene တိရိစ္ဆာန်များ။ Mol Pharmacol ။ 1998; 54: 495-503 ။ [PubMed]
Christoffel DJ သမား, ရွှေလုပ် SA, Dumitriu: D, Robison AJ, Janssen WG ကို, Ahn HF, Krishnan V ကို, Reyes CM, ဟန် MH, Ables JL, Eisch AJ, Dietz DM, ဖာဂူဆန်: D, Neve RL, Greengard P ကိုကင်မ်က Y, Morrison JH , Russo SJ ။ IkappaB kinase လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် Synaptic နှင့်အမူအကျင့် plasticity ထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2011; 31: 314-321 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Colbran RJ ။ Basal autophosphorylation အားဖြင့် Ca2 + / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ၏ Inactivation ။ J ကို Biol Chem ။ 1993; 268: 7163-7170 ။ [PubMed]
Colbran RJ ။ ပရိုတိန်း phosphatases နှင့်ကယ်လစီယမ် / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ကို-မှီခို Synaptic plasticity ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 8404-8409 ။ [PubMed]
Colbran RJ, Brown ကလေး။ ကယ်လ်ဆီယမ် / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II နှင့် Synaptic plasticity ။ Curr Opin Neurobiol ။ 2004; 14: 318-327 ။ [PubMed]
Colby CR, Whisler K ကို Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB ၏ Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 2488-2493 ။ [PubMed]
Covington သူ, 3rd, ဝင်္ငါ LaPlant QC, Vialou, VF, Ohnishi yn, Berton အို Fass DM, Renthal W က, Rush AJ, 3rd, Wu EY, Ghose S က, Krishnan V ကို, Russo SJ, Tamminga ကို C, Haggarty SJ, Nestler EJ ။ histone deacetylase inhibitors ၏စိတ်မကျဆေး Antidepressants လုပ်ရပ်တွေကို။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 11451-11460 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Davalos တစ်ဦးက, ဖာနန်ဒက်ဇ-Hernando ကို C, Sowa, G, Derakhshan B ကို, လင်း MI, Lee က JY, Zhao နှင့် H ကို, Luo အဘိဓါန် R ကို, Colangelo ကို C, Sessa WC ။ caveolin-1-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပရိုတိန်း၏ quantitative proteomics: endothelial ဆဲလ် IN polymerase ဈနှင့်မှတ်တမ်းလွှတ်ပေးရန်အချက် / CAVIN-1 ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Mol ဆဲလ် Proteomics ။ 2010; 9: 2109-2124 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Dumais တစ်ဦးက, Lesage အေဒီ, Alda M က, Rouleau, G, Dumont M က, Chawky N ကို, ရွိုင်းက M, မန်း JJ, Benkelfat ကို C, Turecki G. အနဿတရာယ်အချက်များသတ်သေပြီးစီးမှုအတွက်အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက် in: ထကြွလွယ်သောနှင့်ရန်လိုအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးအမှုထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှု လူတို့သညျ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 2116-2124 ။ [PubMed]
Grueter BA, Robison AJ, Neve RL, Nestler EJ, Malenka RC ။ ΔFosB differential နျူကလိယကိုတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း function ကို accumbens modulates ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2013 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
AR, Dallapiazza RF, Zhou Y ကို, Stein, Qian H ကို IS, Juntti S က, Wojcik S က, Brose N ကို, ဆေးလ်ဗား AJ, ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ JW ရပ်တန့်။ GluN2B မှ binding CaMKII မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးစဉ်အတွင်းအရေးပါသည်။ EMBO ဂျေ 2012; 31: 1203-1216 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hiroi N, Brown JR, Haile CN, Ye H, Greenberg ME, Nestler EJ ။ FosB Mutant ကြွက်များ - Fos နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပရိုတင်းများကိုနာတာရှည်ကိုကင်းများနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ကိုကင်း၏စိတ်ကိုသိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမြင့်တက်လာခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1997; 94: 10397-10402 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ito က R ကို, Robbins TW, Everitt BJ ။ နျူကလိယအားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူကျော် differential ထိန်းချုပ်မှု core နဲ့ shell ကို accumbens ။ နတ် neuroscience ။ 2004; 7: 389-397 ။ [PubMed]
Jorissen HJ, Ulery PG, ဟင်နရီ L ကို, Gourneni S က, Nestler EJ, Rudenko G. အ Dimerization နှင့်ကူးယူအချက် DeltaFosB ၏ DNA ကို-binding ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဇီဝဓါတုဗေဒ။ 2007; 46: 8360-8372 ။ [PubMed]
Jourdain P ကို, Fukunaga K သည်, Muller ဃကယ်လ်ဆီယမ် / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ကိုလှုပ်ရှားမှု-မှီခို filopodia တိုးတက်မှုနှင့်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 10645-10649 ။ [PubMed]
Kelz ကို MB, Chen က J ကို, Carlezon WA, Jr က Whisler K ကို Gilden L ကို, Beckmann လေး, Steffen ကို C, Zhang က YJ, Marotti L ကို, ကိုယ်ပိုင် DW, Tkatch T က, Baranauskas, G, Surmeier DJ သမား, Neve RL, Duman RS, Picciotto MR, Nestler EJ ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999; 401: 272-276 ။ [PubMed]
Klug JR, Mathur BN, Kash TL, ဝမ်, HD, Matthews က RT ကို, Robison AJ, Anderson က ME, Deutch AY, မေတ္တာရှင် DM, Colbran RJ, Winder DG ။ Dorsal Striatal အလတ်စား Spiny အာရုံခံအတွက် CaMKII ၏မျိုးဗီဇတားစီး Functional Excitatory synapses ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အခ်ါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012; 7: e45323 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Knackstedt LA က, Moussawi K ကို Lalumiere R ကို, Schwendt M က, Klugmann M က, Kalivas PW ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုအပြီးမျိုးသုဉ်းလေ့ကျင့်ရေးကိုကင်းရှာတားစီးဖို့ glutamatergic plasticity ဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 7984-7992 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kourrich S ကိုသောမတ်စ် MJ ။ အလားတူအာရုံခံ, ဆန့်ကျင်ဘက်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်: shell ကိုနှိုင်းယှဉ် accumbens core ကိုအတွက်ဂုဏ်သတ္တိများပစ်ခတ် psychostimulant အတွေ့အကြုံကို differential ပြောင်းပြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 12275-12283 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kourrich S က, Klug JR, Mayford M က, သောမတ်စ် MJ ။ Striatal alphaCaMKII ၏ AMPAR-လွတ်လပ်သော Effect ကင်းဆုကြေး၏အသိကိုအားပေးအားမြှောက်။ J ကို neuroscience ။ 2012; 32: 6578-6586 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
LaPlant မေး, Chakravarty S က, Vialou V ကို, Mukherjee က S နဲ့, Koo JW, Kalahasti, G, Bradbury KR, တေလာ SV, ဝင်္ငါ Kumar ကတစ်ဦး, ဂရေဟမ်တစ်ဦးက, Birnbaum စင်ကာပူဒေါ်လာ, Krishnan V ကို, Truong HT, Neve RL, Nestler EJ, Russo SJ ။ အမျိုးသမီးကြွက်တွေမှာသားအိမ်ဟော်မုန်း-mediated စိတ်ဖိစီးမှု hypersensitivity နျူကလီးယားအချက် kappaB ၏အခန်းက္ပ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 65: 874-880 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lee က KW ကင်မ် Y ကိုကင်မ်လေး, Helmin K ကို Nairn AC အ, နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် Greengard P. ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006; 103: 3399-3404 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lisman J ကို, Schulman H ကို, Cline အိပ်ချ် Synaptic နှင့်အမူအကျင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက် CaMKII function ကို၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2002; 3: 175-190 ။ [PubMed]
Lobo MK, Covington သူ, 3rd, Chaudhury: D, Friedman AK Sun, H ကို, Damez-Werno: D, Dietz DM, ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့သမ္မတအိုဘားမားလွှတ်တော်မှာ S က, Koo JW, ကနေဒီ PJ, Mouzon အီး, Mogri M က, Neve RL, Deisseroth K ကိုဟန် MH, Nestler EJ ။ တူတဲ့ကင်းဆုလာဘ်၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ BDNF ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အရှုံး။ သိပ္ပံ။ 2010; 330: 385-390 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Loweth ဂျာ Baker LK, Guptaa T က, Guillory လေး, အနျူကလိယအတွက် CaMKII ၏ Vezina P. တားစီး shell ကိုထိခိုက်ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်စိတ်ကြွဆေးစားသုံးမှုလျော့နည်းစေ accumbens ။ neuroscience လက်တ။ 2008; 444: 157-160 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Loweth ဂျာအဆိုတော် BF, Baker LK, Wilkes, G, Inamine H ကို, Bubula N ကိုအလက်ဇန္ဒား JK, Carlezon WA, Jr က Neve RL, အနျူကလိယအတွက် alpha-Ca2 + / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ၏ Vezina P. ယာယီ overexpression shell ကို accumbens စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်အပြုအမူပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 939-949 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Malinow R ကို, Malenka RC ။ AMPA အဲဒီ receptor လူကုန်ကူးမှုနှင့် Synaptic plasticity ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2002; 25: 103-126 ။ [PubMed]
Matsuzaki M က, Honkura N ကို, အဲလစ်-ဒေးဗီးစ် GC, တစ်ခုတည်း dendritic ကျောရိုးအတွက်ရေရှည်အလားအလာ Kasai အိပ်ချ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအခြေခံ။ သဘာဝ။ 2004; 429: 761-766 ။ [PubMed]
Mayford M က, Bach ME, Huang က YY, ဝမ် L ကို, Hawkins က RD, Kandel ER ။ တစ်ဦး CaMKII Transgene ၏စညျးမဉျြးစညျးကမျးစကားရပ်မှတဆင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ထိန်းချုပ်ရေး။ သိပ္ပံ။ 1996; 274: 1678-1683 ။ [PubMed]
ဝင်္ငါ Covington သူ, 3rd, Dietz DM, LaPlant မေး, Renthal W က, Russo SJ, စက်ပြင် M က, Mouzon အီး, Neve RL, Haggarty SJ, Ren Y ကို, Sampath SC, Hurd YL, Greengard P ကို, Tarakhovsky တစ်ဦးက, Schaefer တစ်ဦးက, Nestler EJ ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် plasticity အတွက် histone methyltransferase G9a ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 2010; 327: 213-216 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့် DeltaFosB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 1208-1215 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nye သူ, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Kelz ကို MB, Iadarola M က, Nestler EJ ။ အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ကင်းသဖြင့်နာတာရှည် FOS-related ကိုပဲ induction ၏စည်းမျဉ်းများ Pharmacological လေ့လာမှုများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1995; 275: 1671-1680 ။ [PubMed]
Okamoto K ကို Bosch ရဲ့ M က, Hayashi Y. dendritic ကျောရိုး၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity အတွက် CaMKII နှင့် F-actin များ၏အခန်းကဏ္ဍ: တစ် Synaptic tag ကိုတစ်အလားအလာမော်လီကျူးရဲ့အထောက်အထား? ဇီဝကမ္မဗေဒ (Bethesda) 2009; 24: 357-366 ။ [PubMed]
Paxinos, G, Watson ဟာ C. stereotaxic သြဒီနိတ်၌ကြွက်ဦးနှောက်။ 6th Edition ကို။ အမ်စတာဒမ်; ဘော်စတွန်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း / Elsevier; 2007 ။
Peakman MC, Colby ကို C, Perrotti LI, Tekumalla P ကို, Carl T က, Ulery P ကို, Chao J ကို, Duman ကို C, Steffen ကို C, Monteggia L ကို, Allen က MR, စတော့အိတ် JL, Duman RS, McNeish JD, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ , Schaeffer အီးသွေးဆောင်, Transgene ကြွက်တွေမှာက c-ဇွန်၏အလွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာ Mutant ၏ဦးနှောက်ဒေသ-တိကျတဲ့စကားရပ်ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2003; 970: 73-86 ။ [PubMed]
Penzes P ကို, Cahill ME, ဂျုံးစ် Ka, Srivastava DP ။ convergence CaMK နှင့် RacGEF အချက်ပြမှုများ dendritic ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆဲလ် Biol ။ 2008; 18: 405-413 ။ [PubMed]
Perrotti LI, Hadeishi Y ကို, Ulery PG, Barrot M က, Monteggia L ကို, Duman RS, Nestler EJ ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ deltaFosB ၏ induction ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 10594-10602 ။ [PubMed]
Perrotti LI, Weaver RR, Robison B, Renthal W က, ဝင်္ငါ Yazdani S က, Elmore RG, Knapp DJ သမား, Selley DE, မာတင် BR, Sim-Selley L ကို, Bachtell RK, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ။ synapses ။ 2008; 62: 358-369 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pickens CL, Airavaara M က, Theberge က F, Fanous S ကိုမျှော်လင့် BT, မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ပေါက်ဖွား၏ Shaham Y. Neurobiology ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2011; 34: 411-420 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပီယပ် RC, လျင်မြန်စွာ EA ၏, Reeder, DC, မော်ဂန် ZR, Kalivas PW ။ ကယ်လ်ဆီယမ်-mediated ဒုတိယတမန်တို့ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျး modulate ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1998; 286: 1171-1176 ။ [PubMed]
Quirion R ကို, Robitaille Y ကို, ကိုယ်ခံဂျေ, Chabot JG, Lemoine P ကို, Pilapil ကို C, မြေတပြင်လုံး hemisphere ကဏ္ဍများကို အသုံးပြု. Dalpe အမ်လူ့ဦးနှောက်ကိုအဲဒီ receptor autoradiography: တစ်ရှူး artefacts minimize လုပ်မယ့်ယေဘုယျနည်းလမ်း။ synapses ။ 1987; 1: 446-454 ။ [PubMed]
Robison AJ, Nestler EJ ။ မှတ်တမ်းနှင့်စွဲလမ်း၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရား။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2011; 12: 623-637 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Robison AJ, ဘေ့စနေ MA, ကွန်ဖူး Y ကို, Macmillan LB, Carmody LC, Bartlett RK, Colbran RJ ။ အဆိုပါ postsynaptic သိပ်သည်းဆပရိုတိန်း NR2B, densin-180 နှင့် alpha-actinin-2 နှင့်အတူကယ်လစီယမ် / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ၏ Multivalent interaction က။ J ကို Biol Chem ။ 2005; 280: 35329-35336 ။ [PubMed]
Ross က PL, Huang က yn, နိမ်ရောဓဖြစ်မှု, Williamson B က, က Parker K ကို Hattan S က, Khainovski N ကို, ဗီပီလေးက S, ဒေးက S, ဒံယေလက S, Purkayastha S က, Juhasz P ကိုမာတင်က S, Bartlet-Jones က M ကို, သူက F, Jacobson တစ်ဦးက, Pappin DJ သမား။ Amin-reactive isobaric မှတ်သားခြင်းဓါတ်ကူပစ္စည်းသုံးပြီး Saccharomyces cerevisiae အတွက် multiplexing ပရိုတိန်း quantitative ။ Mol ဆဲလ် Proteomics ။ 2004; 3: 1154-1169 ။ [PubMed]
ကိုယ်ပိုင် DW ။ ခုနှစ်တွင်: အဆိုပါ Dopamine receptor ။ Neve Ka, အယ်ဒီတာ။ နယူးယောက်: Humana စာနယ်ဇင်း; 2010 ။ စစ။ 479-524 ။
နျူကလီးယပ်အတွက် alpha-ကယ်လစီယမ် / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ၏အဆိုတော် BF, Loweth ဂျာ Neve RL, Vezina P. ယာယီဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression shell ကို alpha-အမိုင်နို-3-ဟိုက်ဒ-5 ၏ကြာရှည်အလုပ်လုပ်တဲ့ upregulation မှဦးဆောင် accumbens -methyl-4-isoxazole-propionate receptors: dopamine အမျိုးအစား-1 အဲဒီ receptor နှင့်ပရိုတိန်းတစ်ဦးကမှီခို kinase ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2010; 31: 1243-1251 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Strack S က, McNeill RB, Colbran RJ ။ အဆိုပါ N-methyl-D-aspartate အဲဒီ receptor ၏ NR2B subunit ဖို့ပစ်မှတ်ထားကယ်လစီယမ် / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ၏ယန္တရားနှင့်စည်းမျဉ်း။ J ကို Biol Chem ။ 2000; 275: 23798-23806 ။ [PubMed]
Ulery-Reynolds က PG, Castillo MA, Vialou V ကို, Russo SJ, Nestler EJ ။ DeltaFosB ၏ Phosphorylation Vivo အတွက်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှု mediates ။ neuroscience ။ 2009; 158: 369-372 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ulery PG, Nestler EJ ။ Ser27 phosphorylation အားဖြင့် DeltaFosB မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 25: 224-230 ။ [PubMed]
Ulery PG, Rudenko, G, Nestler EJ ။ phosphorylation အားဖြင့် DeltaFosB တည်ငြိမ်မှု၏စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 5131-5142 ။ [PubMed]
et al Vialou V ကို။ ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက် DeltaFosB စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates ။ နတ် neuroscience ။ 2010; 13: 745-752 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝမ် L ကို, LV Z ကို, Hu Z ကို, Sheng J ကို, Hui B ကို Sun, J ကို, Ma အယ်လ်နာတာရှည်ကင်း-သွေးဆောင် H3 acetylation နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် CaMKIIalpha ၏မှတ်တမ်း activation မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအတှကျအရေးပါသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35: 913-928 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Werme M က, Messer ကို C, Olson L ကို, Gilden L ကို, Thoren P ကို, Nestler EJ, Brene အက်စ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ဘီးပြေးထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 8133-8138 ။ [PubMed]
Winstanley, CA, LaPlant မေး, Theobald DE, အစိမ်းရောင်က TA, Bachtell RK, Perrotti LI, DiLeone RJ, Russo SJ, Garth WJ, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB သော induction ကင်း-သွေးဆောင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသည်းခံစိတ် mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 10497-10507 ။ [PubMed]
Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, Kelz ကို MB, Shaw-Lutchman T က, Berton အို Sim-Selley LJ, Dileone RJ, Kumar ကတစ်ဦး, Nestler EJ ။ မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 205-211 ။ [PubMed]
Zhang က R ကို, Khoo က MS, Wu Y ကို, ယန် Y ကို, Grueter အီး, နီ, G, စျေး EE, Jr ကသီရဲလ် W က, Guatimosim S က, သီချင်း LS, Madu EC, Shah က AN, Vishnivetskaya က TA, Atkinson JB, Gurevich VV, Salama, G, Lederer WJ, Colbran RJ, Anderson က ME ။ Calmodulin kinase II ကိုတားစီးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှလုံးရောဂါကာကွယ်ပေးသည်။ နတ် Med ။ 2005; 11: 409-417 ။ [PubMed]